ပြည်တွင်းစစ်ပြသနာ – ရဲဘော်ကြင်မောင် – သူပုန်ဂေဇက်
ပြည်တွင်းစစ်ပြသနာ – ရဲဘော်ကြင်မောင်
ပြည်သူ့အာဏာ အမှတ် (၂၁) နှင့် (၂၂) တွင် ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုပြဿနာကို နောက်တစ်ပုဒ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်
ပြည်တွင်းစစ်ပြသနာဟာ မျိုးဆက်သစ်များ ဖြေရှင်းရမည့် အဓိက ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီအတွင်းမျိုးဆက်သစ်များသို့ သိလိုက်မီလိုက်သမျှကို ပုဂ္ဂလိက အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမျိုးဆက်သစ်များလည်း (စိတ်ဝင်စားလျှင်) ဖတ်ရန် ပြည်သူအာဏာတွင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်အကြိုနှင့် အစောပိုင်းကာလက ကိစ္စရပ်များကို အဓိက ဇာတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဦးနု၊ သိန်းဖေ(မြင့်) နှင့် ဦးကျော်ငြိမ်းတို့သာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ တခြားတဖက်က ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မရေးနိုင်ခဲ့ပါ။
နု၊ သိန်း၊ ငြိမ်းတို့လည်း သူတို့ ရေးခဲ့စဉ် ကာလက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရသာ
ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံပြီး သုံးသပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ “ကျော်ငြိမ်း” စာအုပ်မှာ ဦးကျော်ငြိမ်း “နိဒါန်း” ဆိုတာပဲ ရေးပါတယ်။ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကလည်း ဦးကျော်ငြိမ်းလက်ခံနိုင်တာပဲ ရေးပါတယ်။ သူ့စာအုပ်အဖွင့်မှာပါ “ပက်လက်ကုလား ထိုင်မှာ အမြိန့်သား မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ထိုင် – စမြုံ့ပြန်ခြင်း ဆိုတာဟာ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ပြောရုံသက်သက် မဟုတ်ပါ။
ဦးနုကို အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ အမတ် ပြုတ်နှစ်ဦး ဦးနုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ နိုင်ငံရေး တိုက်ကွက် ရှာကြတာ၊ ညှိနှိုင်းကြတာဖြစ် ပါတယ်။ စာအုပ်ရေးတဲ့နှစ်က (၁၉၆၁) ခုနှစ်ပါ။ ဦးနု၊ (ပထစ) အစိုးရတက်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နေဝင်းအုပ်စုလည်း အာဏာမသိမ်းရ သေးပါ။ ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ရွှေ အစရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီး (၁၃) ယောက်ကို တပ်က ထုတ်ပြီးကာစဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မောင်မောင် ဟာ ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆိုတာလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ။
အဲဒီ နိုင်ငံရေးနောက်ခံနဲ့ ရေးတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်လို့ ယထာဘူတ မကျ၊ အဖြစ် မှန်နဲ့မကိုက်တာတွေ အများကြီး ပါနေပါတယ်။
ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့ နိဒါန်းကြည့်ရင် လည်း သူ့နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကို ခုခံကာကွယ် လျှောက်လဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘာကြောင့် လူမုန်းများရတယ်၊ ဦးနုက လူပေါ်လူဇော်လုပ်တယ်ဆိုတာကို ပေါ်အောင် ရေးပါတယ်။
ဦးနုက ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထုတ် “တာတေ စနေသား” ရေးပြန်တော့လည်း ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ သူသာလျှင် စိတ်ချရတယ် ဆိုတာ နယ်ချဲ့သမားတွေ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်သိအောင် ရေးဖို့က အဓိက ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ဦးသိန်းဖေ (မြင့်)၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့နဲ့ တလေသံ တည်း ရေးပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် စတင်လုပ်ခဲ့ တာတော့ သူမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဗသိန်းတင်တို့က ရေးမသွားနိုင်ကြပါ။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းက လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပျက်တာကိုပဲ မြင်သွားရသူပါ။ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဗသိန်းတင်တို့ကသာ ၁၉၄၈ ပြည်တွင်း စစ် ပြဿနာကို ပိုပြီးအတွင်းကျကျ ရေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာ ဖြေရှင်း ရမယ့်တာဝန်ဟာ မျိုးဆက်သစ်ရဲ့ ပခုံးပေါ် ရောက်နေပါပြီ။ ကွန်မြူနစ်တို့ဘက်က အမြင်ကို မိမိအနေနဲ့ သိလိုက်လိုက်သမျှ ရေးပါတယ်။
အစီရင်ခံသူ။ ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာ၏ ဇာစ်မြစ်
ဗမာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးရင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ စပြောသူက ချာချီ ( Churchill ) ပါ။ သူကလည်း စော၊ စိန်၊ မော် (ဦး စော၊ သခင်ဗစိန်၊ ဒေါက်တာဗမော်) အားကိုးနဲ့ ပြောတာပါ။ သူပြောသလိုမဖြစ်ခဲ့ပါ။ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးရဲ့ အင်အား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အင်အား ရှိနေလို့ မဖြစ်တာပါ။
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာက လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပြိုကွဲတော့မှ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေးသာ မပြိုကွဲရင် ပြည်တွင်းစစ်ကို ဘယ်သူတွေကပဲ လှုံ့ဆော်နေနေ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ထူးခြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆ဝ ကျော်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမို့ ဇာတ်ရည်လည်အောင် ရှည်ရှည်ရေးရပါမယ်။ မူကွဲတွေ လည်း ရှိနိုင်တာဖြစ်လို့ ပုဂ္ဂလိကတင်ပြချက်အဖြစ်ပဲ သဘောထားပါ။ အဓိကဇာတ်ကောင် ခေါင်းဆောင်ကြီး တွေ မရှိတော့လို့လည်း တင်ပြရတာ စိတ်မသန့်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းမယ့်သူတွေ သိထားမှ အဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်လို့ တာဝန်အရ တင်ပြပါတယ်။
လက်ဝဲညီညွတ်ရေး စပြီးပြိုကွဲတာ (ဗကပ) ထဲက ပါ။ ၁၉၄၆ မှာပါ။ ဘရောက်ဒါဝါဒသွင်းလာသူလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) နဲ့ သခင်စိုး (သူ့ကိုယ်သူ ဘရောက်ဒါဝါက ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ အပျိုစင်လို့ သတ်မှတ်သူ) ရဲ့ ပဋိပက္ခက စပါတယ်။ ဘရောက်ဒါဝါဒကို အကြောင်းပြုပြီး တိုက်ကြတာပါ။ ဂိုဏ်းဂဏတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ မကျေနိုင်မချမ်းနိုင် တိုက်ကြ ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း ကျိတ်ပြီးတိုက်နေရာက ပဋိပက္ခကို မကြိတ်ချေနိုင်ဘဲ ပေါက်ကွဲသွားတာပါ။ ဒီမိုကရေစီဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအရ အများစုကြီးက သခင်ဗဟိန်း၊ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်)၊ သခင်သန်းထွန်းတို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု ခံယူပါတယ်။ အဲဒီတော့ သခင်စိုးက သူ့လူတချို့နဲ့ ပါတီခွဲထောင်ပါတယ်။ သခင်စိုးက ဗကပ ကိုရော၊ ဖဆပလ ကိုပါ ထောင်တိုက်ပါတယ်။
ဗကပ ကို တိုက်ရင် သိန်းသန်း (သိန်းဖေ၊ သန်းထွန်း) ကို ဦးတည်ပါတယ်။ အချောင် သမားလို့ ဆဲပါတယ်။ ဖဆပလ ကို တိုက်ရင် ဗိုလ်အောင်ဆန်းကို ဦးတည်ပါတယ်။ ဂျပန်နဲ့ ပေါင်းသူ၊ “ဆောင်ကြာမြိုင်ဗိုလ်ချုပ်” လို့ သူကဆဲပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းက ဘုရားငဆောင်လို့ ပြန်ပက် ပါတယ်။ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ကို မတိုက်ပါဘူး။ ဘေးမဲ့ပေးပါတယ်။ အလေးထားစရာလို့ မထင်လို့ပါ။
“ဆွေငြိမ်း” တို့ကလည်း သူတို့အပြစ်နဲ့သူတို့မို့ သိမ်ငယ်နေပါတယ်။ ဟဲဗီးဝိတ် အတန်း တက်မထိုးသေးပါ။ ဦးနုကိုတော့ နိုင်ငံရေးထဲ အတင်းဆွဲခေါ်ထားရချိန်ပါ။ တနေ့မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မယ့်သူလို့ ဘယ်သူမှ မထင်ခဲ့ပါ။ အဖြစ်အပျက်တခု တင်ပြပါမယ်။
ဖဆပလ ဗဟိုက အထက်ဗမာပြည်သို့ စည်းရုံးရေး ပထမဆုံးဆင်းစဉ်က အဖြစ်အပျက် ကလေးပါ။
ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း (ဥက္ကဌနဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ခေါင်းဆောင်ပြီး ဆင်းလာတာပါ။ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဘဖေ၊ ဦးမြ (၂) မြ စသူများ ပါလာပါတယ်။ တမျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးရဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းတာပါ။ ကိုလိုနီခေတ်ဟောင်း နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကို အစည်းအဝေးခေါ်၊ ဖဆပလ သဘောထားရှင်းပြကြတာပါပဲ။ အဓိကရှင်းပြသူက ဗိုလ်အောင်ဆန်း နဲ့ သခင်သန်းထွန်းပါ။ ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက ဘာမှဝင်မပြောပါဘူး။ ဦးဘဖေပဲ တခါဝင်ပြော ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ ဆရာတော်တပါးက “ဗမာပြည်နဲ့အင်ဒိုနီးရှား ဘယ်သူအရင် လွတ်လပ် ရေးရမလဲ” လို့ မေးပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း (အထူးသဖြင့်သခင်သန်းထွန်း) တို့က စပြီးရှင်းပြပါတယ်။ အမျိုးသားစည်းလုံးရေးရှိသူက အရင်လွတ်လပ်ရေးရမယ် ဆိုတဲ့ သဘော ရှင်းနေတုန်း ဦးဘဖေက နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းချင်းမို့ ခြေမြင်ပြီး “ဆရာတော်မေးတဲ့ မေးခွန်းက “academic question ” ပဲ၊ ဖြေစရာမလိုဘူး” ဆိုတဲ့သဘော ပြောလိုက်ပါတယ်။ သခင်သန်းထွန်းလည်း ဆက်ရှင်းစရာမလို၊ အဲဒီ ဘုန်းကြီးလည်း ငြိမ်သွားပါတယ်။ (နောက်ပိုင်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ အဲဒီဆရာတော် ဖဆပလမှာ တွင်ကျယ်နေပါတယ် ) ၊
ဦးကျော်ငြိမ်းကတော့ ဘာတခုမှ ဝင်မပြောပါ။ သူက ညပိုင်း “လက်ဝဲ” အချင်း ချင်း (လက်တွေ့လုပ်နေကြတဲ့ ကေဒါတွေနဲ့ အစည်းအဝေး၊ ဦးဘဖေ၊ ဦးမြတို့ မပါဘူး) ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ သူပြောတာက ဖဆပလ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ဗကပဆိုင်းဘုတ်ယှဉ်ပြီး အဆောက်အဦတခုတည်းမှာ တင်ထားတာ ကို ကန့်ကွက်တာပါ။
ဗိုလ်အောင်ဆန်းက “တကယ်လုပ် တဲ့လူ နေရာရမှာပဲ” လို့ ပိတ်ပြောလိုက်တော့ ငြိမ်သွားပါတယ်။ စောဒကမတက်ပါ။
သခင်စိုး၊ ဗိုလ်အောင်ဆန်း အပြန် အလှန်အပုပ်ချပွဲ (သခင်စိုးက စတာ) ကျမှ ဗိုလ်အောင်ဆန်းကို ပစ်ပြီးထောက်ခံကာ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ ဆရာမွေးပါတယ်။ ဖဆပလ ကွန်မြူနစ်ကွဲတော့ သူတို့ပိုပြီး တွင်ကျယ်လာ ပါတယ်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနေရာကို အပိုင်စီးကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအမွေဆိုတာမှာ ကောင်း မွေရော ဆိုးမွေပါ ရှိပါတယ်။ သခင်စိုးရဲ့ ဂိုဏ်း ဂဏက ဆိုးမွေပါ။ ဖဆပလ အတွင်း လက်ယာ ဂိုဏ်းကို အားတက်စေပါတယ်။ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ သခင်စိုးအပေါ်ထားတဲ့ တန်ပြန် ဂိုဏ်း ဂဏကလည်း (ဗကပ) ကို မနာလိုမရှုစိမ့် ဖြစ်နေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို အားတက်စေ တာပါပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်စုဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ မတက်ကြွခဲ့ပါဘူး။ အချောင်ခိုပါတယ်။ ဒါလူတိုင်းအသိပါ။ (ဗကပ) ထဲက အလံနီခွဲထွက်တော့ (ဗကပ) သိက္ခာကျ ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအတွက် အကွက် ကောင်းပါ။ သူတို့က ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကို စည်းရုံးရမယ့်ပစ်မှတ်ထား ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ ။
(စကားချပ်) ဘရောက်ဒါဝါဒ အကြောင်းပြုပြီး “ရှားစောင်းစေးနဲ့မျက်ချေး” ဖြစ်နေတဲ့ သခင်စိုးနဲ့ ဦးသိန်းဖေ ( မြင့် ) တို့ဟာ နောက်ဆုံးတော့ မဆလ ခြံထဲ ရောက်ကြ ပါတယ်။ သူတို့ချင်း စည်းလုံးမိကြပါတယ်။ သင့်မြတ်စွာအတူနေကြပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းကို အားတက်သရော အလုပ်အကျွေးပြုကြပါ တယ်။ သက်တမ်းအတိုင်းနေပြီး သေဆုံးသွား ကြပါတယ်။ ပါတီရဲ့ သမိုင်းမှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးသုံးယောက်၊ ဥက္ကဌသုံး ယောက် ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး သခင်အောင်ဆန်းက ရန်သူ့ လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးပါတယ်။ “ကြက်ခေါင်းဆိတ် မခံ” ဖြစ်ကြတဲ့ သခင်စိုးနဲ့ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) နှစ်ယောက်ပဲ သစ္စာဖောက်ဖြစ်ပြီး (မဆလ) ကို အလုပ်အကျွေးပြုသွားကြပါတယ်။ ဥက္ကဌ နှစ် ယောက် (သခင်သန်းထွန်းနဲ့ သခင်ဇင်) က ရန်သူ့လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးပါတယ်။ ဥက္ကဌ တယောက် (သခင်ဗသိန်းတင်) က အခြေ အနေအရ ပြည်ပမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
အလံနီက ဂိုဏ်းခွဲတော့ ဖဆပလ ထဲက လက်ယာဂိုဏ်း တစခန်းထသလို ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကလည်း တဖြည်း ဖြည်းချင်း လက်ယာဘက်သို့ တိမ်းညွတ်သွား ပါတယ်။ ဖဆပလက ဘုရင်ခံအမှုဆောင် အဖွဲ့ထဲ ဝင်မိတော့ အလိုတော်ရိ ဦးတင်ထွဋ်နဲ့ ပေါင်းမိပါတယ်။ ပိုပြီးလက်ယာဘက် ယိမ်း ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်နဲ့စေ့စပ်ရေးကို တက်တက် ကြွကြွ လုပ်ပါတယ်။ “ရရင်ရ မရရင်ချ” ဆိုတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းလမ်းစဉ်ကိုတောင် မရဲတရဲ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ “ချရေး” ကို ပယ်ပြီး “ရရေး” ကို ဇောက်ချလုပ်ပါတယ်။ (ဗကပ) က “ချရေး” ကို ဇောင်းပေးပါတယ်။ ဗိုလ် အောင်ဆန်း ကျဆုံးတော့ သူတို့လွတ်လွတ် ကျွတ်ကျွတ် လက်ယာယိမ်းသွားကြပါတယ်။ ဦးနုကို မှုစရာလို့ သူတို့ဘယ်တုန်းကမှ သဘော မထားပါ။
(ဗကပ) နဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းတို့ လုပ်နေတဲ့ ဖဆပလ ကွန်မြူနစ် ညီညွတ်ရေး (လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပြန်လည်တည်ဆောက် ရေး) လည်း ဗိုလ်အောင်ဆန်းကျဆုံးလို့ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ရပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မရခင်က ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ဖဆပလ ကွန်မြူနစ်ညီညွတ်ရေးကို ဟန်ပြကိုင်စွဲပြီး (ဗကပ) ကို အညွန့်ချိုးဖို့ လုပ်ပါသေးတယ်။ အညွန့်ချိုးတဲ့နည်းက အများစုက ဆုံးဖြတ်ထား တာကို မဝေဖန်ရဆိုတာပါ။ ဖဆပလ တပ် ပေါင်းစုဟာ တူတာတွဲလုပ်၊ မတူတာခွဲလုပ်ဖို့ ဖွဲ့ထားတာပါ။ ပါတီမဟုတ်ပါဘူး။ မတူရင် ဝေဖန်ခွင့် ရှိရမှာပါ။
လွတ်လပ်ရေးရတော့ အညွန့်ချိုး ရေးက တဆင့်တက်ပြီး (ဗကပ) ချေမှုန်းရေး လုပ်ပါတယ်။ (ဗကပ) အညွန့်ချိုးရေးနဲ့ ချေမှုန်းရေးဟာ အနှစ်သာရအရ ပြောရင် “လက်ဝဲအင်အားစု” ဆန့်ကျင်ရေးပါပဲ။
နောက်တော့ တခြားလက်ဝဲ အင်အားစု ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေ၊ တပ်တွင်း လက်ဝဲသမားတွေ (ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ်၊ ဗိုလ်သိန်း၊ ဗိုလ်လှမော်၊ ဗိုလ်စိုးမောင် စသူများ) တောခိုကြရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီထဲက လက်ဝဲအင်အားစုတွေတောင် ဖဆပလ အစိုးရရဲ့ အတိုက်အခံ ဖြစ် သွားရပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြေပေါ် “ကွန်မြူနစ်” လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး အနှိမ်ခံကြရပါတယ်။
အဲဒီကာလက အရေးကြီးဖြစ်စဉ် တချို့ တင်ပြပါမယ်။ “လက်ဝဲပြန်လည်ညီညွတ်ရေး” ကို ဗိုလ်အောင်ဆန်းလုပ်ခဲ့သလို ဦးနုနဲ့ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) တို့ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဦးနုက “နုမူ” ဆိုတာ တင်ပြပြီး “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” လုပ်ပါတယ်။ “ရဲဘော် မူ” ဆိုတာကို ပြည်သူ့ရဲဘော်က စင်ပြိုင်တင် ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ခြေထိုးဖျက်ဆီး ပါတယ်။
“နု” လုပ်စက အင်္ဂလိပ်က ဦးနုရဲ့ “ပရိယာယ်ဝေဝုစ် ” ကို နားမလည်ပါဘူး။ “ဗမာပြည် နီသွားပြီ ” လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက် မှ ဦးနုရဲ့ လှည့်ကွက်ဆိုတာ သိသွားပါတယ်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကတော့ ဗိုလ်အောင်ဆန်း မရှိတော့ကတည်းက အဖမဲ့သား ဖြစ်နေတာပါ။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက နု၊ ရဲဘော်မူ ပဋိပက္ခမှာ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကို မဖျက်သိမ်းနိုင်တော့ (၂) ခြမ်းခွဲပစ်လိုက် ပါတယ်။ အနည်းစုကို သိမ်း သွင်း၊ အများစုကြီးကို တောထဲမောင်းပို့ ပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဆန်းရှိစဉ်က ပြည်သူ့ ရဲဘော်ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ မထိရဲပါဘူး။ ၁၉၄၇ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲမှာ ဗိုလ်အောင်ဆန်း က ပြည်သူ့ရဲဘော်ဗိုလ်တွေကို လွှတ်တော်ထဲ အမတ်အဖြစ် ပို့ပေးထားတာ မနည်းပါဘူး။
(စကားချပ်။ တော်လှန်ရေးကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့တပ်ကို အမတ်နေရာ ပေးတာနဲ့ တလက်ကိုင်ကြေးစားတပ်အတွက် အမတ်နေရာတောင်းတာ (အမတ် လေးပုံတပုံ တောင်းတာ) အနှစ်သာရချင်း မတူပါဘူး။)
ပြည်သူ့ရဲဘော်အမတ်က ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအမတ်နဲ့ အင်အားချင်းဆတူလောက် ဖြစ်နေတာကို ဆိုရှယ်လစ်တွေ မနှစ်မြို့ပါဘူး။ “သိန်းဖေမြင့်၏ ကျော်ငြိမ်း” စာအုပ်မှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ပြည်သူ့ရဲဘော်ကို ကမ္ဘာ့ဗဟု သုတ ဘာမှမရှိသူတွေလို့ ရေးတာကို ကြည့်ပါ။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကို အမြန်ဖျက်သိမ်းဖို့လည်း သူလုပ်ခဲ့တာကို ဝန်ခံထားပါတယ်။
နုမူ ရဲဘော်မူ အငြင်းပွားမှုကို ချက် ကောင်းယူပြီး လက်ဝဲအင်အားစု ပြည်သူ့ ရဲဘော်ကို ဖဆပလထဲက မောင်းထုတ် တော ထဲပို့ ချေမှုန်းရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုညစ်ပတ် နည်းမျိုးကို (ဗကပ) အပေါ်လည်း ၁၉၄၈ မတ်လက လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖဆပလ ကွန်မြူနစ် ညီညွတ်ရေး ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီက ယုံကြည်လောက်တဲ့ လူတွေပါတဲ့အဖွဲ့ ဖွဲ့ပါ တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲရက်ချိန်း သူတို့ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီရက်မှာပဲ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပါတီခေါင်းဆောင်စုကိုဖမ်းဖို့ ဝရမ်းထုတ်ထား ပါတယ်။ တကယ်က များခေါ်ပြီး ဖမ်းဖို့ပါ။
ဦးနု “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” နဲ့ နိုင်ငံရေးကစားတာနဲ့ မရှေးမနှောင်း ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကစားပါတယ်။
ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ “လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေး” လုပ်နည်းကတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗစိန် ထွန်းအုပ် လက်ယာဂိုဏ်းသား ဗိုလ် နေဝင်းကို ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး တို့က လက်ဝဲစာရင်းဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး ခဲ့ပြီး၊ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) က ဗိုလ်နေဝင်းကို လက်ဝဲ သမားထိပ်သီးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကာ အာဏာသိမ်းခိုင်းတာပါပဲ။ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ သံသယဖြစ်စရာ ချည်းပါပဲ။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ်က ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ဟာ ပုလိပ်သတင်းပေးပါလို့ ဗိုလ်နေဝင်းက အတိအကျ စွပ်စွဲပါတယ်။ ပုလိပ် မင်းကြီး ၊ ပရက်စကော့ကားပေါ် တက်လိုက် သွားတာ သူ့မျက်မြင်ပဲလို့ “ပီကင်းဆွေးနွေးပွဲ ၁၉၇၉” တုန်းက ပြောပါတယ်။ တီတူးရင်း မြင်တာလို့တော့ မပြောပါ။
အခုကိစ္စမှာလည်း ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) က ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ ညှိပြီးလုပ်တာလို့ သံသယ ရှိစရာပါ။ ဗိုလ်နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အသေအလဲခန့်ချင်နေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကို အသုံးချပြီးလုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်လို့ ထင်ရပါတယ်။
စစ်အုပ်စုဝင်တွေ ရေးတဲ့ပြောတဲ့ ထဲမှာ ဗိုလ်ဇေယျကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မလုပ်ရလို့ တောခိုသူဖြစ်အောင် ရေးကြ ပြောကြပါတယ်။ ဗိုလ်ဇေယျလုပ်တာက ဗိုလ် နေဝင်း (ဆိုရှယ်လစ်) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မဖြစ်ဖို့ပါ။
ဦးကျော်ငြိမ်းက ဗိုလ်နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်ဖို့ ဦးနုကို စည်းရုံးပြီးသားပါ။ ဦးနုရေးတဲ့ “တာတေစနေသား” မှာ ပါပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြုတ်တိုက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ တိုက်မယ့်သူ၊ နိုင်ငံတော်စစ်တပ်ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ တလက်ကိုင်တပ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ့်သူဟာ ဗိုလ်နေဝင်းပါ။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ လူရွေးကောင်းပါတယ်။ ဗိုလ်ဇေယျရှိနေရင် ဗိုလ်နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထားဖို့ မလွယ်ပါ။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအလိုကျ တိုက်ပေးမယ့်သူမဟုတ်လို့ ဗိုလ်ဇေယျကို ပယ်ရပါမယ်။
ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” က လက်တွေ့အရတော့ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ်၊ ဗိုလ်သိန်း၊ ဗိုလ်လှမော်၊ ဗိုလ်စိုးမောင်စတဲ့ လက်ဝဲဆန်တဲ့၊ ဆိုရှယ်လစ်မဟုတ်တဲ့ ရဲဘော်တွေ တောခိုရတာပါပဲ။ ဗိုလ်နေဝင်း တလက် ကိုင်တပ်ဖြစ်ဖို့ လမ်းရှင်းပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွား ပါတယ်။
နောက်တော့ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးကျော်ငြိမ်းက အိမ်ကိုဖိတ် ကားလွှတ်ခေါ်ပြီး အိမ်ဝ က စောင့်ဖမ်းခိုင်းတာ ခံရပါတယ်။ ထောင်ထဲခဏ ရောက်ပြီး ထောင်ကလွတ်တော့ ဘေးမဲ့နိုင်ငံရေး သမား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အလွန်ကို မသင်္ကာစရာကြီးပါ။
ဦးနု၊ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) တို့ရဲ့ “လက်ဝဲညီညွတ် ရေး” လှည့်ကွက်တွေ ပြီးကတည်းက မြို့ပေါ်မှာ “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” လုပ်တာ မရှိတော့ပါ။ ပုံစံသစ်နဲ့ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးသာ ရှိပါတော့တယ်။ ဘယ်သူကမှလည်း ဗဆွေ ကျော်ငြိမ်း ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို လက်ဝဲအင်အားစုလို့ မသတ်မှတ်တော့ပါ။
“လက်ဝဲညီညွှတ်ရေး” ပျက်ရုံနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချက်အလက်ကဘာလဲ။ ဒီကိစ္စကို ဆက်ပြီး တင်ပြပါမယ်။
ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချက်အလက်
ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ အိန္ဒိယနဲ့ လမ်းကြောင်းချင်း အခြေခံကနေပြီး ကွဲသွားပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ နိုင်ငံရေးချင်းတွဲနေတာပါ။ ကိုလိုနီချင်း တူကြလို့ပါပဲ။ ဟိုက အဟိံသ ( Ahimsa ) ဆို၊ ဒီက အဟိံ သ။ ဟိုက ဟုမ္မရူး ( Home – rule ) ဆို၊ ဒီက ဟုမ္မရူး။ နောက်က လိုက်လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ တသီးတခြားလုပ်ကြဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ နိုင်ငံခြား အဆက်၊ လက်နက်ရရာရေသောက်မြစ် ရှာကြတော့ ဟိုမှာ သူဘတ်ချန်ဒရာဘို့စ် ( Subhash Chandra Bose ) တယောက်ပဲ ထွက်ရှာပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာက တို့ဗမာအစည်းအရုံး လက်ဝဲဂိုဏ်းနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရော လက်ယာဂိုဏ်းပါ လူငယ်အင်အားစုတိုင်း ထွက်ရှာ ပါတယ်။ ဟိုက ဂျာမဏီနဲ့အဆက်ရပြီးမှ ဂျပန်ရောက်ပါတယ်။ ။
ဗမာက ဂျပန်နဲ့ အရင်တွေ့ပါတယ်။ တွေ့ပုံကလည်း တမျိုးဆန်းပါတယ်။
လက်ဝဲဂိုဏ်းက အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပါ။သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်လှမြိုင်အကြောင်းက အတော်များများရေးထားလို့ လူတိုင်းသိပြီးပါ။ ထပ်မရေးတော့ပါ။ သခင်ဗဟိန်းခရီးလည်း ဒဂုန်တာရာရေးလို့ သိပြီးပါပြီ။
အများမသိကြတဲ့ကိစ္စ ရေးပါမယ်။ ကိုဗဟိန်းဟာ သူကိုယ်တိုင်သွားမရတော့ သွားလို့ရတဲ့ ရဲဘော်တယောက် လွှတ်ပါတယ်။ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်က တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်ကို တိုက်နေရတာပါ။ လက်နက်ကူဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အတွေးအခေါ်နဲ့ စာနာထောက်ခံတာပဲ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကိုဗဟိန်းလွှတ်လိုက်တဲ့ ရဲဘော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ အဆက်ပြန်ရပုံကလည်း ဆန်းပါတယ်။ (ဗကပ) နဲ့မရပါ။ အရင်ဆုံးရတာက ဦးနု၊ ဗိုလ် အောင်ကြီး တို့နဲ့ပါ။
ဦးနုနဲ့ ချိုအင်လိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ချင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ စကားပြန်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ လျှို့ဝှက်ပြီးနေရတဲ့ ကိုဗဟိန်းလွှတ်တဲ့ ရဲဘော် က ဝင်ဘာသာပြန်ပေးရပါတယ်။ ဝါးခယ်မသား ချင်းပေမယ့် ဦးနုက မမှတ်မိပါ။ ဦးနုနဲ့ပါသွားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးက ချက်ချင်းမှတ်မိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ တရုတ်ကပြားချင်းမို့ သူတို့ချင်း သိကြပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့တော့ မှတ်မိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ကွဲသွားတာကြာပါပြီ။ ချက်ချင်း မှတ်မိစေတာက ဂျပန်ခေတ်မှာ ဗိုလ် အောင်ကြီးက အဲဒီရဲဘော် နှမနဲ့ရတယ်။ သူ့ ဇနီးက တရုတ်ပြည်သွားတဲ့ သူ့အစ်ကို စစ်ပြီး လည်း ပြန်မရောက်၊ စာလည်း မလာလို့ တနေရာရာမှာ သေပြီလို့ ထင်နေတယ်။ သေချာအောင်စုံစမ်းခဲ့ဖို့ မှာလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့တွေ့ချင်း မှတ်မိတာပါ။
ဟိုတုန်းက အကူအညီကို တကယ် ပေးမယ်ဆိုပေးနိုင်တာက ကေအမ်တီ (KMT) ပါ။ အင်္ဂလိပ်က ခေါ်သွင်းလို့ KMT တပ်မကြီး တွေ ဗမာပြည်ထဲ ရောက်ကြပါတယ်။ တောင်ငူ မန္တလေး လမ်းတလျှောက် ဂျပန်ကို ခံတိုက် ကြပါတယ်။ မနိုင်လို့ဆုတ်လာရင်း KMT ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လူထုဆီက လုယက်ပါတယ်။ ကျောက်သံပတ္တမြားနဲ့ ရွှေပဲ လုတာပါ။
မန္တလေးမှာ ဘုရားကြီးကရွှေ ခွာဖို့ လုပ်ပါတယ်။ မအောင်မြင်ပါ။ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မှာတော့ အများကြီးရသွားပါတယ်။ လုပ်ပုံက သင်းပါတယ်။ တပြည်လုံးက သူဌေးတွေ လာခို နေတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ လူကြီးတွေ အစည်း အဝေးခေါ်ပါတယ်။ လူကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး ရွှေ၊ကျောက်သံပတ္တမြား ကြေးပစ်ပြီး ရွေးခိုင်း ပါတယ်။ ပြေးရင်းလွှားရင်း ပြန်ပေးဆွဲတာ ဆိုတော့ နေ့ချင်းပြီး ရွေးယူခိုင်းတာပါ။ မပေး နိုင်လို့ ၊ ငွေတိုက်ဝန်ထောက် ဦးရွှေသား အသတ် ခံလိုက်ရပါတယ်။
သူဌေးတွေက ပေးနိုင်လို့ လွတ်ပါ တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ ငွေတိုက်အရာရှိ ဆိုတာ သူဌေးအကြီးဆုံးပါ။ အဲဒီစံချိန်နဲ့ တောင်းလို့ ကိုလိုနီ ငွေတိုက်ဝန်ထောက် မပေးနိုင်ပါ။ တဆွေလုံးတမျိုးလုံး လိုက်စုပြီး သွားရွေးတော့ တောင်းသလောက်မပြည့်လို့ သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ။ လူလည်းသတ်၊ ရသလောက် လည်း ယူသွားပါတယ်။
သခင်နု၊ သခင်စိုး၊ သခင်မြသွင်တို့ KMT တပ်နဲ့ လိုက်သွားတဲ့အကြောင်းတော့ လူသိများပါတယ်။ KMT ဗိုလ်ချုပ်က ထားပစ်ခဲ့ ထောင်ထဲပြန်ထည့်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလည်း လူသိများပါတယ်။
ဒီလိုဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ တော့ ရေးကြတာ မတွေ့ပါ။ သီပေါ ဂျပန် သိမ်းသွားလို့ ဆိုတာပဲ ရေးကြပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
– ချန်ကေရှိတ် KMT ဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကို တိုက်နေတာပါ။ ဗမာ ကွန်မြူနစ်ကို မကူညီနိုင်ပါဘူး။ (သခင်နုလည်း “လူမွဲတို့ထွက်ရပ်လမ်း” ဘာသာပြန်ထားသူပါ။ KMT ကတော့ ကွန်မြူနစ်ထဲ စာရင်းသွင်း မှာပါ။)
– ခေါ်မရလို့ လွှတ်ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါ။ ထောင်ထဲ ပြန်ထည့်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အငြိုအငြင် မခံချင်ပါဘူး။
– အဲဒီ KMT တပ်တွေတော့ တရုတ်ပြည် ပြန်ရောက်ပါတယ်။ လုသွားတဲ့ ရွှေတွေ၊ ရတနာတွေလည်း ပါသွားပါတယ်။ (နု၊ စိုး၊ သွင်) ကို ခေါ်ချင်ရင် ခေါ်သွားနိုင်လျက်နဲ့ ထားခဲ့တာ ရှင်းပါတယ်။
– နောက်ပိုင်းမှာ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ချုံကင်းရောက်တော့လည်း မကူညီပါ။
တို့ဗမာအစည်းအရုံး လက်ယာ ဂိုဏ်းကတော့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ပဲ ရှာတာပါ။ သူတို့က မာ့က်စ်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ နစ်ရှေး (Nietzsche ) အဆိုအမိန့် ကို လက်ခံပါတယ်။ နာဇီဝါဒ အားကျပါတယ်။ သူတို့ ဂျပန်ရောက် သွားတာဟာ ရောက်ချင်တဲ့နေရာ ရောက်တာပါ။ နောက်တော့လည်း ဖက်ဆစ်ကို မတော် လှန်ပါ။ ဂျပန်စစ်ရှုံးတော့ အင်္ဂလိပ် အလိုတော်ရိ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးဇာတ် သိမ်းသွားပါတယ်။
စော (ဦးစော)၊ စိန် (သခင်ဗစိန်)၊ မော် (ဒေါက်တာဗမော်) “စောစိန်မော်” အဖြစ်တွဲမိပြီး ဖဆပလ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရင်း ဇာတ်သိမ်းပါတယ်။
သူတို့ ဇာတ်သိမ်းတာဟာ ကိုလိုနီ ခေတ် လက်ယာဂိုဏ်း လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတာပါပဲ။
လက်ယာဂိုဏ်းဟောင်းနေရာကို ဆွေငြိမ်းလက်ယာဂိုဏ်းသစ် ယူလာပါတယ်။
ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ် နဲ့ (အမေရိကန်တောင်ပါသေး) အဲဒီက ရပါတယ်။ ဖောချင်းသောချင်း ရတာကတော့ စစ်မြေပြင်ကပါ။ အင်္ဂလိပ်အပြေးနဲ့၊ ဂျပန်အပြေးမှာ ရပါတယ်။
စစ်ပြီးတော့ ကိုလိုနီပြန်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်ရှိထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်က ဂျပန်တော်လှန်ရေး တပ်တွေဆီက လက်နက်ပြန်သိမ်းပါတယ်။ အထက်ဗမာပြည်မှာဆိုရင် စကတည်းက လက်နက် ငှားတယ်ဆိုပြီး ငှားရတာပါ။ မြို့သိမ်းမိတော့ သူတို့တပ်ထဲဝင်ပါ၊ ဗိုလ်တွေကို နဂိုရာထူးအတိုင်း ထားမယ်။ အားလုံးကို သူ့စနစ်အတိုင်း လစာ ပေးမယ်လို့ မြူဆွယ်ပါတယ်။ မဝင်ဘူးဆိုမှ ငှားထားတဲ့ လက်နက်အားလုံး ပြန်အပ်ခိုင်း ပါတယ်။ လက်ပစ်ဗုံး တလုံးတောင် မချန်ပါ။
သူ့ကွပ်ကဲမှုနဲ့ ဂျပန်ကိုတိုက်တဲ့ တခြား လူမျိုးစုတပ်တွေဆီက လက်နက်ပြန်သိမ်းတယ် မကြားမိပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်က လက်နက်ကိစ္စမှာ အကဲ ဆတ်ပေမယ့် အမေရိကန်ကတော့ ဂရုမထားပါဘူး။ သူက ဧည့်သည်ပဲ၊ စစ်နိုင်ဖို့ပဲ ပဓာန။ ထုတ်ပေးတဲ့လက်နက် စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်မသိမ်းပါ။ စစ်ပြီးတော့လည်း သူတို့လက်နက်တွေကို ကျင်းထဲ ထည့် ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ပြီး မြေပြန်ဖုံး ထားခဲ့တာပါ။ အလေးခံပြီး ပြန်ယူမသွားပါဘူး။
(အဲဒီလက်နက်တွေ တော်လှန်ရေးက ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘူးနွယ် ( spring ) တွေပဲ သုံးမရပါ။ ကြက်ပေါင်ကြိုးတပ်ပြီးပစ်ရင် ရပါတယ်။ စစ်ပြီးတာမကြာသေးလို့ ပြောင်းတွေ၊ ကိုယ်ထည်သံတွေ ကောင်းပါသေးတယ် )
အနောက်တိုင်းသားတယောက် ရေးတဲ့စာအုပ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ အမေရိကန် (၁၀၁) နဲ့ အင်္ဂလိပ် (၁၃၆) တပ် တာဝန်ခံ အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာ ပါပါတယ်။ အဲဒီစာမှာ လက်နက်ထုတ်ပေးတဲ့ စာရင်းတချို့ ပါပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ သဘောထား သိနိုင်ပါ တယ်။
၁၀၁ တပ်မှူးရေးတဲ့စာမှာ သူတို့အတွက်တော့ ရယ်စရာ။ ဗမာပြည်အတွက်တော့ နာကျည်းစရာတခုကို တွေ့ပါတယ်။
သူရေးပုံက ဗမာပြည်မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားတွေက စစ်အတွင်း ကူညီခဲ့တာ အတွက် သူကောင်းပြုတံဆိပ်ပေးဖို့ တောင်းကြကြောင်း သူကအထက်ကိုတင်ပြပြီး အိန္ဒိယမှာ ရွှေတံဆိပ်ကြီးတွေလုပ်ပြီး ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စစ်မှာကူညီခဲ့တာကို အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ CMA တံဆိပ်ပေးခဲ့ကြောင်း (CMA ဆိုတာ Citation of Military Assistance) ကြေးနန်းရိုက်ရမှာ (comma) ကိုအတိုကောက် CMA လို့ သုံးကြောင်း။ ဒါကြောင့် သူတို့ချင်းတော့ CMA တံဆိပ်ကို “ကော်မာ” လို့ပဲ နောက်ပြောင်ကြကြောင်း ရေးပါတယ်။
အမေရိကန်က ကိုလိုနီပြန်လုပ်ဖို့လာတာ မဟုတ်လို့ မျက်နှာလွဲခဲပစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကတော့လုပ်လို့ မရပါ။ အဲဒီတံဆိပ်ကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုပါ။
နိုင်ငံရေးအဆက်နဲ့ လက်နက်ရှာလိုက်ရတာ လက်နက်က ရမယ့်ရတော့ တော်လှန် ရေးသမားသာမက လယ်သမားတွေပါ ရကြပါတယ်။
စစ်လက်နက်ပညာကို လယ်သမား ကတော့ ကျောင်းကရတာ မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ က ရပါတယ်။ ဒီတိုနေတာ (detonator) ယမ်းကို အပ်နဲ့ထွင်လို့လက်ပြတ်၊ ဗုံးကိုတူနဲ့ထုလို့ တကျောင်းလုံး ဘုန်းကြီး၊ ကိုရင်၊ ကျောင်းသား တွေ ပျံလွန်သေဆုံးကြပြီးမှ ပညာရကြပါတယ်။ လက်နက်ငယ်ကတော့ စနစ်တကျသာမရှိတာ လယ်သမား အတော်များများ ပစ်တတ်ကြ ပါတယ်။ မတော်တဆ သေနတ်ထွက်လို့ သေတာလည်း မနည်းပါ။ ဘာပဲပြောပြော လက်နက်ကို ကိုင်တတ်သုံးတတ်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေ လက်နက်ရကြပါတယ်။
၁၉၄၅ မှ ၁၉၄၈ ထိ ဗမာပြည်အခြေအနေ
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ တရားဝင် (ဥပဒေတွင်း) ပါတီ ဖြစ်နေပြီ။ “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ကို ကျောရိုးပြုတဲ့ ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီး ရှိနေပြီ။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးအတွင်း စစ်ကိုဦးစီးတဲ့ အတွေ့ အကြုံရှိ ကေဒါတွေ ရှိနေပြီ။
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရ ပြန်လာ တယ်။ သူတို့နဲ့ ပါလာတာက နိုင်ငံရေးစီမံကိန်း၊ စီးပွားရေး စီမံကိန်းတွေပဲ။ အိန္ဒိယမှာ စစ်ပြေး အစိုးရအဖြစ်နေရင်း ဆင်းမလား (Simla) မှာ စိမ်ပြေနပြေ ရေးဆွဲလာတဲ့ စီမံကိန်းတွေ ဖြစ် တယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့စီမံကိန်း (project) တွေဟာ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေနဲ့ ဆွဲထား တဲ့ စီမံကိန်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗမာပြည်ကို ပြန်သိမ်းပြီးရင် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ စီမံ ကိန်းကဘယ်လို၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးကို ဘယ် ပုံလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းတွေချည်းပဲ။ စစ်အတွင်းလက်လွတ်သွားသမျှကို အတိုးချပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ဖို့ စီမံ ကိန်း ချည်း ဖြစ်တယ်။ စီမံကိန်းတွေကို ဘုတ် (Boards) အဖွဲ့တွေနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ပဲ။
နိုင်ငံရေးစီမံကိန်းကတော့ နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုတွေကို ဖိနှိပ်ဖို့နဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဒိုမီနီယံအုပ်ချုပ်ရေးဆီသို့ သွားဖို့ ဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပြည်သူ ထိပ်တိုက် တွေ့ကြတဲ့ကာလက ၁၉၄၅ နဲ့ ၁၉၄၆ စက်တင် ဘာလအထိ ဖြစ်တယ်။
၁၉၄၆ စက်တင်ဘာ အုံကြွမှု နောက်ပိုင်းမှာ လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပြိုကွဲတယ်။ နောက် ၁၉၄၇ နှစ်ဆန်းမှာ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ လုပ်တယ်။ အလားအလာကောင်းတယ်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကောင်းတဲ့အလား အလာတွေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကွယ်ပျောက် ကုန်တယ်။ လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပြိုကွဲမှုက ပြည်တွင်းစစ်ဆီသို့ ဦးတည်ခဲ့ပြီ။
ဖဆပလကို လက်ယာအင်အား စုတွေ တစတစအုပ်စီးမိလာနေပြီ။ ဆင်းမလား စီမံကိန်းတွေကို ဒိုင်ခံပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ ဦးတင်ထွဋ် ဖဆပလမှာ လူတွင်ကျယ် ဖြစ်လာတယ်။ ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကလည်း လက်ဝဲဝါဒ ကို စွန့်ပစ်နေပြီ။ လက်ယာဘက်သို့ ရွေ့လျား နေပြီ။
နိုင်ငံရေးမှာ အဲဒီလိုပြောင်းလဲနေ ချိန်မှာ တပြည်လုံးရဲ့ အခြေအနေကလည်း အလွန်ကို တင်းမာနေတဲ့ကာလ ဖြစ်တယ်။
ဘုတ်အဖွဲ့မျိုးစုံရဲ့ ဖြစ်ညှစ်သွေးစုပ် မှုကို လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ ခံနေ ရတယ်။ စစ်အတွင်း မွဲပြာကျနေတာမှာ ထပ်ပြီး “လဲရာသူခိုးထောင်း” ခံရတော့ လယ်သမား သူပုန်တွေ ပေါ်လာတယ်။ အလုပ်သမား သပိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။
လယ်သမားသူပုန်ဆန်ဆန် ဓားပြ ဂိုဏ်းကြီးတွေ ပေါ်နေတယ်။ အင်အားရာချီ ရှိတဲ့၊ အမြောက်စိန်ပြောင်း စက်သေနတ်တွေ ရိုင်ဖယ်တွေ အပြည့်ရှိတဲ့ ဓားပြဂိုဏ်းတွေပဲ။ စစ်ပြီးကတည်းက ရှိနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီဓားပြဂိုဏ်းကြီးတွေက ခွာစစ်ဆင် တဲ့ဂျပန်နဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အင်္ဂလိပ် အကြိတ် အနယ်တိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်တလင်းဒေသတွေမှာ ပေါ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကူး တိုက်ပွဲကြီးတွေ တိုက်ခဲ့ရာဒေသမှာ ဖြစ်တယ်။
မတ်လ ၂၇ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ဖြစ်တော့ ဂျပန်ကပြေးစစ် ဖြစ်သွားပြီ။ အင်္ဂလိပ်က လိုက်စစ်။ အဲဒီတော့ စစ်မြေပြင်ကို မရှင်းနိုင်ဘဲ အင်္ဂလိပ်က အတင်းလိုက် သွားတယ်။ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ပြန့်ကျဲကျန် ရစ်တယ်။ အဲဒီလက်နက်တွေကို ဆင်းရဲသား လယ်သမားတွေရပြီး ဓားပြဂိုဏ်းကြီးတွေ ပေါ်တာပဲ။
မြသန်းတင့်ရေးလို့ ရှင်မတောင် ခင်မောင်ဂိုဏ်းကို လူသိများပါတယ်။ အဲဒီလို ဂိုဏ်းမျိုးက ဆယ်ခုမက ရှိပါတယ်။
ဒီလယ်သမားသူပုန်ဆန်တဲ့ ဓားပြ ဂိုဏ်းတွေဟာ နိုင်ငံရေး နလပိန်းတုံးတွေ မဟုတ်ပါ။ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ် ရှိပါတယ်။ ဖဆပလကိုထောက်ခံပါတယ်။ ရှေးတုန်းက “မင်းလောင်း” လှုပ်ရှားမှုလိုလည်း မဟုတ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်က ခေတ်မီ တော်လှန်ရေးဆန်ပါတယ်။ သူတို့အခြေခံတဲ့ ဒေသလူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုပါတယ်။ တခြားဒေသ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရှိရာ ဒေသ ကိုသာ သွားဓားပြတိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေး ပုလိပ်က သူတို့ကို မယှဉ်ဝံ့ပါ။ စစ်တပ်နဲ့နှိမ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တော့ အင်္ဂလိပ်က စစ်တပ်ကို ခဏခဏ ထုတ်မသုံးနိုင်ပါဘူး။ တခါတလေမှ သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လယ် သမားသူပုန်ဆန်တဲ့ ဓားပြဂိုဏ်းတွေဟာ ကြာလေကြီးလေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဖဆပလဟာ ဘုရင်ခံအမှုဆောင် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါသွားတော့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ပေါ်လစီအတိုင်း ဓားပြဂိုဏ်းကို နှိမ်ပါတယ်။ ရွာမီးရှို့ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်တွေဦးစီးတဲ့ “အထူးလက်နက်ကိုင် ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့” ဆိုတာ တွေနဲ့ နှိမ်နင်းတာပါ။
ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ပေါ်လစီက သူတို့ ပေါ်လစီနဲ့ မတူပါဘူး။ ကွန်မြူနစ်ပေါ်လစီက
– ဘုတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ သွေးစုပ်မှု ကြောင့် ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ ဆင်းရဲသား လယ်သမားတွေရဲ့ ရုန်းကန်မှုလို့ သဘောထား ပါတယ်။ နှိမ်နင်းရေးထက် ဖျောင်းဖျပညာပေး ရေးကို အဓိကထားပါတယ်။ ။
– မှားယွင်းတဲ့နည်းနဲ့ နယ်ချဲ့ကို တုံ့ ပြန်ကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို တော်လှန်တဲ့ နည်း ပေးအပ်ရမယ်လို့ သဘောထားပါတယ်။
ဆင်းရဲသားလယ်သမားတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ကွန်မြူနစ်တွေက ကြည့်နေလို့ မဖြစ် ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းက ကူညီခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲ ဖြေရှင်း ပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အငတ်တပ်ချီတက်ပွဲ လုပ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ( SAMB ) ဂိုဒေါင် ထဲက စပါးလုပါတယ်။ “ခေါင်းပါးရေးလမ်း” ဖောက်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ (“ခေါင်းပါးရေး လမ်း” ဆိုတာက ငတ်နေသူတွေ ကိုယ့်တူရွင်း၊ ပေါက်ပြားနဲ့လာပြီး လမ်းဖောက်ကြ။ အစိုးရက နေ့တွက်လုပ်ခအဖြစ် ဆန်ထုတ်ပေး။ အဲဒီလိုနဲ့ မိသားစုအငတ်ဘေးကို နွေရာသီအတွက် ကျော်လွှားရတာဖြစ်တယ်။ ဆန်တွေက အစိုးရ ဂိုဒေါင်ထဲချည်း စုနေလို့ လုပ်ရတဲ့ တိုက်ပွဲပါ။) စစ်ကြီးအပြီးမှာ ဆန်ဈေးကကောင်း၊ ဆန်က လည်း ရောင်းကောင်းနေလို့ အင်္ဂလိပ်က ဆန်တွေ ပြည်ပချည်း ထုတ်ရောင်းနေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ငတ်တယ်။
၁၉၄၅ က ၁၉၄၆ စက်တင်ဘာ အထိ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနဲ့ သိပ်ပြီးပြဿနာ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက သူတို့ သာ မလုပ်တာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အတိုက်အခံလုပ်နေရတဲ့ကာလမို့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ လုပ်တာကို ထောက်ခံခဲ့တယ်။ ၁၉၄၆ စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်း ဖဆပလက အစိုးရအဖွဲ့ထဲဝင်မိတော့ တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ကွန်မြူနစ်တွေလုပ်တာဟာ သူတို့ကို တိုက်တာပဲ လို့ ထင်လာတယ်။
လယ်သမားတွေ ငတ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့မယုံပါဘူး။ ( အခုစစ်အစိုးရအပါအဝင် အစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်း မယုံကြပါဘူး။) ကွန်မြူနစ်က လူတွေငတ်နေပြီပြောပြီး တိုက်ပွဲဆင်ချင်လို့ လုပ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ အခြေခံထားတဲ့ လူတချို့ မငတ်တာကိုကြည့်ပြီး အားလုံးမငတ်ဘူးလို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ လူတန်းစားရပ်ခံချက်ပြဿနာ၊ လူတန်းစားအမြင် ပြဿနာ ပါပဲ။
“လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ကို အလေးထားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရှိတုန်းက ပြဿနာ မကြီးခဲ့ဘူး။ သူမရှိတော့ ပြဿနာက ကြီးလာတယ်။
လက်ယာဆိုရှယ်လစ်တွေက အင်္ဂလိပ် အလိုမကျ မှာနဲ့ ဖဆပလထဲ တွင်ကျယ်လာတဲ့ အလိုတော်ရိ ဦးတင်ထွဋ်တို့လို လူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု မရမှာဘဲ စိုးကြတယ်။ “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ကို စတေးပြီး “လက်ယာညီညွတ်ရေး” ကို တည်ဆောက်ကြ တော့တယ်။
လွတ်လပ်ရေးရလာတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို အပြတ်ရှင်းပစ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ဆိုရှယ်လစ် လက်ယာဂိုဏ်းက ထင်လာတယ်။ အပြတ်ရှင်းရင် ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ ထောက်ခံမှုရမယ်။ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အားပေးမှုရမယ်။ (၆ လ) ရှင်းလိုက်ရင် ပြတ်မယ်လို့ထင်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်း အစီအစဉ်နဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို အလစ်အငိုက် တိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ပုဒ်မ (၅) ဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့ ၀ရဇိန်လက်နက်ပဲ။
နောက်ပိုင်းကျတော့ ဝန်ကြီးနှစ်ဦး ဦးတင်ထွဋ်နဲ့ ဗိုလ်စိန်မှန် ဝန်ကြီးအဖြစ်က နုတ်ထွက်ပြီး ဗိုလ်လုပ်ကာ တိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိနဲ့ လက်ယာ ဆိုရှယ်လစ်တို့ရဲ့ “ညီညွတ်မှု” ပြယုဂ်ပါပဲ။
ပြည်တွင်းစစ် စတုန်းက အင်္ဂလိပ်စစ်မစ်ရှင် ရှိနေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိ ဦးတင်ထွဋ်က ဗိုလ်တင်တွင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဦးတင်ထွဋ်မှာ စစ်တိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ထောက်ခံမှုရအောင် သူသာလုပ်နိုင်တယ်။ ဂေါ်ရခါးစစ်သား နီပေါကနေ စုနိုင်တယ်။
ပြည်တွင်းစစ်အစပိုင်းမှာ အစိုးရခိုင်းသမျှ လုပ်တဲ့တပ်က လူမျိုးစုတပ်တွေနဲ့ ဂေါ်ရခါး တပ်တွေပဲ။ ရွာတွေမီးရှို့၊ လူတွေသတ်တာကို သူတို့က ကြေးစားစိတ်နဲ့ ဗမာလူမျိုးမုန်းတီးရေးစိတ် ပေါင်းပြီး အပြတ်သားဆုံး လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက လက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါ။ “ဥပဒေ” အရ လုပ်တယ်လို့ဖြစ်အောင် အရေးပိုင် (ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီး) က စစ်တပ်အကူအညီတောင်း၊ စစ်တပ်ကပစ်သတ် ဆိုတာဖြစ်အောင် စီစဉ်ပါတယ်။
(ဥပမာ) ပျဉ်းမနားမှာ အရေးပိုင် “စည်သူအောင်ဖေ” က စစ်ဆင်ရေးကြီးတိုင်းမှာ လိုက်ပါရပါတယ်။ “စည်သူအောင်” သံချပ်ကာကားပေါ်ကနေ ဟောပြောနေတဲ့ပုံကို အဲဒီခေတ် က ထုတ်တဲ့ သတင်းစာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံတုန်းကလည်း အဲဒီပုံမျိုးပါပဲ။ အရေးပိုင် (ခရိုင်ရာဇဝတ် တရားသူကြီး) က အုံကြွမှုကို နှိမ်နင်းဖို့ စစ်တပ်ကို အကူအညီတောင်း စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် နှိမ်ပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ကြီးကလည်း ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံတုန်းက တံတားနီအရေးအခင်း မှာ အဲဒီလို ဥပဒေအတိုင်း စစ်တပ်က မလုပ်လို့ သာ အပြစ်တင်ပါတယ်။ သူ့စာကို မှတ်မိကြ မယ် ထင်ပါတယ်။
ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလှည့်ပြီး လုပ်နေရတာ အရစ်ရှည်တယ်။ ခက်လည်း ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်အောင် အခုတော့ တိုင်း၊ ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံတွေအဖြစ် စစ် ဗိုလ်တွေကိုပဲ ထားပါတယ်။ “စည်သူ အောင်ဖေ” လို “ကြားလူ ́မလိုအောင် လုပ် ထားပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးဆင်းတဲ့ စစ်ဗိုလ်တိုင်း လူသတ်လိုင်စင် ရနေပါတယ်။ ဦးနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ တွက်ခဲ့သလို ပြည်တွင်းစစ်ကလည်း ၆ လနဲ့ မပြီးပါ။ အနှစ် (၅၀) ကျော်တဲ့အခုအထိ မပြီးပါ။
လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားခြင်းနဲ့ ဘရောက်ဒါဝါဒအမှား ဆက်စပ်မှု
ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ကို ကျောရိုးပြုပြီး ဖဆပလကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ပြန်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးသို့ ချီတက်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီစည်းရုံးရေးလမ်းစဉ်ဟာ မှန်ကန်ပါတယ်။ မျိုးချစ်ပါတီက ဟင်္သာတဦးမြ၊ ဓားမပါတီက ပျော်ဘွယ်ဦးမြ၊ ငါးပွင့်ဆိုင် ဦးဘဖေ စသူတွေကို တိုးချဲ့ စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ –
နိုင်ငံရေး အင်အားစုတိုင်းကို ဖဆပလ အလံအောက် ရောက်အောင်လုပ်တဲ့ စည်းရုံးရေးလမ်းစဉ်ဟာ အခြေခံအားဖြင့် မှန်ပါတယ်။ မှားတာက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်တွေကို တိုက်ပွဲမဆင်တာပါပဲ။ ဒီလို ဖြစ်တာဟာ “ဘရောက်ဒါဝါဒ” အတွေးအခေါ် ကြောင့်ပဲ။ ဖဆပလထဲမှာ ဒိုမီနီယံလောက်နဲ့ တင်းတိမ်နိုင်သူတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပေးမယ့်ရာထူး မက်သူတွေ အများကြီးပါလာပါတယ်။ သူတို့ ကို လက်ဝဲညီညွတ်ရေးတပ်ဦးက အတွေး အခေါ်ရေးအရနဲ့ စည်းရုံးရေးအရ ပြတ်ပြတ် သားသား ခေါင်းဆောင်ရပါမယ်။
ယူဂန်ဒါ (Uganda) ထောင်ပြန် ဂဠုန်ဦးစော၊ ဂျပန်ထောင်ပြန် ဒေါက်တာ ဗမော်နဲ့ ဂျပန်က သံအမတ်ခန့်နယ်နှင်ရာက ပြန်လာတဲ့ သခင်ဗစိန်၊ သခင်ထွန်းအုပ်တို့ကိုလည်း စည်းရုံးပါတယ်။ သူတို့က ဖဆပလထဲ မဝင်ဘဲ “စောစိန်မော်” ဂိုဏ်း ထောင်ပါတယ်။ ဖဆပလနဲ့ စင်ပြိုင်လုပ်ပါတယ်။ ဖဆပလကို အပြင်ကနေ ဖြိုခွဲပါတယ်။ ဘုရင်ခံအလိုကျ လုပ်ကြပါတယ်။
ဘုရင်ခံက အစိုးရအဖွဲ့ (ဘုရင်ခံ အမှုဆောင်အဖွဲ့) ဖွဲ့တော့ ရာထူးတွေပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဖဆပလက မူပေါ်အခြေခံပြီး တောင်းဆိုချက်တင်တယ်။ စောစိန်တို့ကတော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံတယ်။ (ဒေါက်တာဗမော်ကို အင်္ဂလိပ်က မကြည်ဖြူပါဘူး။ ရာထူးမပေးပါဘူး။ သူတို့လက်ခံရုံနဲ့ အားမရဘဲ ဖဆပလထဲရောက်နေတဲ့ သူတို့ဂိုဏ်းသားတွေပါ ဆွဲတယ်။ တချို့ပါကုန်ကြတယ်။
ကျန်ရစ်သူက ဦးမြ နှစ်မြနဲ့ ဦးဘဖေ စသူတို့ပဲ။ သူတို့က သူတို့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ မပါတာဖြစ်တယ်။ သူတို့က စောစိန်မော်အောက် ပြန်မရောက်ချင်ဘူး။ ဦးဘဖေကတော့ ဒေါက်တာဗမော်နဲ့ ကမ္ဘာရန် ဖြစ်နေလို့ပဲ။ ဘာပဲပြောပြော သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ကြိုဆိုသင့် ပါတယ်။ ဖဆပလထဲရှိတဲ့ လက်ယာဂိုဏ်းအဖြစ် လေးစား ရမှာ ဖြစ်တယ်။ စောစိန်မော် အလိုတော်ရိ လက်ယာဂိုဏ်းထဲ ရောက်မသွားတာဟာ ကောင်းမှုပြုတာလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
ဖဆပလထဲက လက်ဝဲဂိုဏ်းသာ ညီညွတ်နေရင် သူတို့ဘာအန္တရာယ်မှ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဦးဘဖေက ဒိုမီနီယံရလည်း ကျေနပ်မယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် ဖဆပလ ဆုံးဖြတ်ချက် လိုက်နာပြီး လုံးဝလွတ်လပ်ရေးလို့ ပြောနေ တာပါ။
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီထဲက ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့လို စစ်ဗိုလ်တွေက (ဗကပ) ရဲ့ ဘရောက်ဒါဝါဒအမှား ရောင်ကို မလွတ်တမ်းဆွဲလေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆရာတွေကတော့ မဆွဲပါ။ သူတို့ ၁၉၄၇ – ၄၈ မှာ လုပ်တာနဲ့ လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာဟာ ဘရောက်ဒါဝါဒ အဆို အမိန့်အတိုင်း လိုက်လုပ်ခဲ့တာပဲ ဆိုတာကို သိလို့ပါ။ အလိုတော်ရိ လက်ယာဂိုဏ်း (ဟောင်း) သာယာဝတီ ဦးပုကတော့ လွတ်လပ်ရေးကို ဂန္ဒီဝါဒအရ လုပ်ခဲ့လို့ ရတာလို့ ရေးပါတယ်။ ဘရောက်ဒါဝါကို စာရင်းမသွင်းပါဘူး။
ဘရောက်ဒါဝါဒကြောင့် (ဗကပ) ထဲမှာ အကွဲအပြဲဖြစ်တာ မှန်ပေမယ့် ကွန်မြူနစ် ဆိုရှယ်လစ်ကွဲတာ အဲဒါကြောင့်မဟုတ်ပါ။ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးပြိုကွဲတာဟာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက လက်ယာဘက်ရွေ့ သွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရဲ့ “ကျော်ငြိမ်း စာအုပ်ထဲမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက သူ့တသက် အကြီးဆုံးအမှားက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက မာ့က်စ်ဝါဒကို လက်ခံနေတာ ကို မတွန်းလှန်ခဲ့မိတာပဲလို့ပြောကြောင်း ပါပါတယ်။
ဦးကျော်ငြိမ်းကလည်း သူ့နိဒါန်းမှာ ငြင်းမထားပါဘူး။ စကတည်းက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို ဥရောပက ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီတွေလို လက်ယာပါတီအဖြစ် ဖွဲ့ခဲ့ရရင် အကောင်းသား လို့ ပြောတာပါ။
ဒါက ဦးကျော်ငြိမ်း စိတ်ကူးယဉ်တာပါပဲ။ လက်ဝဲအလံမလွှင့်ရင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဟာ ဖဆပလထဲ ရောက်မှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်အောင်ဆန်း (ဗကပ) ကပါ သူတို့ကို နေရာ ပေး ဆက်ဆံတာက လက်ဝဲအလံလွှင့်ထားလို့ပါ။ ဗိုလ်အောင်ဆန်း မရှိမှ လက်ဝဲအလံကို သူတို့ လွှင့်ပစ်ရဲတာပါပဲ။ တူဖြစ်ခိုက်နာနာနှက်ချင်သူများ
၁၉၄၈ ခုနှစ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်နဲ့ ပြည်တွင်းစစ် စဖြစ်တဲ့နှစ်အဖြစ် သမိုင်းတွင် နေပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာမှာ ပြည်တွင်းအခြေအနေနဲ့ အကြောင်း အချက်က အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
ဇဒါးနော့ဗ် အစီရင်ခံစာကြောင့်လို့ ဦးနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့က ပြောပါတယ်။ ဦးနုက မဆီမဆိုင် ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် ဒါးနော့ဗ် ဗမာ ပြည်ချစ်တာ “ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြဲနေ သလောက်ရှိတယ်” လို့ ရေးပါတယ်။ ဇဒါး နာ့ဗ် အစီရင်ခံစာက နယ်ချဲ့စနစ် ကိုလိုနီဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေးကို ရေးထားတာပါ။ ပြည်ချစ်ဝါဒ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုရှားတယောက်ဟာ ရုရှပြည်ချစ်ဝါဒပဲ ရှိမှာပေါ့။ ဗမာပြည် ပြည်ချစ် ဝါဒ မရှိနိုင်ပါ။ ဦးနုရဲ့ စာအုပ်က စစ်အေးခေတ် ကာလ ရေးတာဆိုတော့ “မော်စကိုတပည့်” “ပီကင်းတပည့် ” ဆိုတာတွေပါတာ မဆန်းပါ။ (အခု စစ်အေးလွန်ကာလမှာတော့ (ဗကပ) က “ပီကင်းတပည့်” မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဆိုနေကြ ပြန်ပြီ။)
ဦးနုက ပြည်တွင်းအကြောင်း အချက်တခုကို ထည့်ရေးပါတယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်း ရဲ့ “ကိုယ်က ဦးအောင်ချရေး” လုပ်ဟန် ရေးပါတယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်းအပြောကို အခြေခံတဲ့ “လန်ကြတ်” ဇာတ်လမ်းကလေး “ကပိုင်က အဖြစ်အပျက်” ကို ဦးနုက သက်သေပြပါတယ်။
မကြာခင်ကထုတ်တဲ့ လူထုဦးလှ နှစ် (၉၀) ပြည့် စာအုပ်ထဲက “ပြည်ထောင်စု လမ်းသွယ်က မောင်နု” ဆောင်းပါး ဖတ်ရတော့ မှ ဦးနုရဲ့ ပရိယာယ်ကို သိရပါတယ်။ တကယ်က “နံပါတ်တစ်တရားခံ” နေရာကို ဦးကျော်ငြိမ်း လွှဲပေးနေတာကိုး။ (တကသ အဆောက်အဦ ကိစ္စမှာ နံပါတ်တစ်နေရာ ဗိုလ်နေဝင်းက ဗိုလ်အောင်ကြီးကို လွှဲပေးနေသလိုမျိုး။)
ဘယ်သူလုပ်လုပ်ပါ။ ပြည်တွင်းစစ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေ ကပဲ ပြည်တွင်းစစ်ဖန်တီးတာပါ။ ပေါ်လစီကို ချတဲ့လူနဲ့ ပေါ်လစီကို အကောင်အထည် ဖော်တဲ့လူက ဘယ်သူတွေလဲ။ ပေါ်လစီက ဘာ တွေလဲ။ ဒီကိစ္စ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြဿနာ ရှင်းချင်ရင် ပေါ်လစီကို ကိုင်ရပါမယ်။ လူက တချိန်ချိန်မှာ သေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသေရုံနဲ့ ပေါ်လစီမသေပါ။ ကျန်ရစ်ပါတယ်။ ပေါ်လစီ သေမှ ပြဿနာပြေပါတယ်။
ပေါ်လစီချသူတွေဟာ ဗိုလ် အောင်ဆန်း မရှိတဲ့ခေတ်မှာ ဆိုရှယ်လစ် ပါတီပါ။ ဒါကြောင့် ကြာကြာဝါးမှ ခါးမှန်းသိပြီး ဦးနု ဖဆပလကို ခွဲခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှာ ဦးနှောက် အလှုပ်ရှားဆုံးသူက ဦးကျော်ငြိမ်းပါ။ ဒါကြောင့် ဦးနုက “နံပါတ်တစ်” နေရာ ပေးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဆုံးဖြတ်မှ ပေါ်လစီဖြစ်တာပါ။ ဦးနုကပယ်ရင် ပေါ်လစီဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
လွတ်လပ်ရေးရတော့ ဖဆပလ အစိုးရက အင်္ဂလိပ် ချခဲ့တဲ့ပေါ်လစီကိုပဲ ဆက် လုပ်ပါတယ်။ အောက်ခြေသိမ်း ပြောင်းလဲမှု လုံးလုံးမလုပ်ပါ။
သူတို့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အလုပ် ဆုံးက လူစားထိုးရေးပါ။ ဘုရင်ခံအမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ဖဆပလဝန်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ အစားထိုးတာ၊ ဘုရင်ခံနေရာ သမ္မတနဲ့ အစားထိုးတာ လုပ်ပြီး တဲ့နောက် ပြန်သွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ၊ ကုလား တွေရဲ့ ရာထူးကြီးနေရာတွေ အစားထိုးရ ပါတယ်။ တချို့ရာထူးက ပညာအခြေခံတဲ့ ရာထူး၊ အတွေ့အကြုံ အခြေခံတဲ့ရာထူးတွေပါ။ ဒီနေရာမျိုးမှာ နဂိုရှိရင်းစွဲ တိုင်းရင်းသား ဗျူရိုကရက်တွေနဲ့ပဲ အစားထိုးပါတယ်။ ပညာမင်းကြီး၊ တိုင်းမင်းကြီး၊ ဟိုမင်းကြီး ဒီမင်းကြီး စသဖြင့် အစားထိုးရင် အဲဒီဌာနက တိုင်းရင်းသား ဝါရင့်အရာရှိနဲ့ အစားထိုး ပါတယ်။ အခုခေတ်လို တန်မတန် ရာမရာ မစဉ်းစားဘဲ စစ်ဗိုလ်နဲ့ အစားမထိုးပါဘူး။
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ သမဂ္ဂကျောင်းသား ကို “လူမိုက်” လို့ ကြိမ်းမောင်းခဲ့တဲ့သူက ပညာမင်းကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ လယ်သမား သူပုန် ကြိုးပေးခဲ့သူက တရားသူကြီးချုပ် စသဖြင့် ဖြစ်လာပါတယ်။ “လွတ်လပ်ရေး အရသာ” သူတို့စတင်ခံစားကြပါတယ်။ ဖဆပလ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဝန်ကြီးတွေကို သူတို့ အရိုအသေ အလွန်ပေးပါတယ်။ ဒါဟာ ဖဆပလ ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ ဗျူရိုကရက်များရဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကြီးပါပဲ။ ဖဆပလမှာ တော်လှန် တဲ့ လက္ခဏာ မကျန်တော့ပါဘူး။
လစ်လပ်သွားတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် နေရာနဲ့ ကော်မတီနေရာတွေက နိုင်ငံရေး နေရာတွေပါ။ ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ ဦးနုရဲ့ အပေါင်း အသင်းတွေအတွက် “ရှယ် ” နေရာတွေပါပဲ။ စစ်ဗိုလ်တွေက အစိုးရအမှုထမ်းတွေဖြစ်နေလို့ အဲဒီ ဓာတ်တော်ဝေခန်းမှာ မပါကြရပါ။ သူတို့ နိုင်ငံရေးနေရာတွေနား မကပ်နိုင်ပါဘူး။ စစ်တပ် ထဲပြန်မဝင်ဘဲ နိုင်ငံရေးဝင်လုပ်တဲ့ BIA. BDA ဗိုလ်ဟောင်းတွေ “လွတ်လပ်ရေးအရသာ” ခံစားကြတာကြည့်ပြီး မနာလိုရုံမှတပါး ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။
“ဝန်ကြီးလုပ်နေတဲ့ သခင် – – ဟာ BDA တုန်းက ဗိုလ်ဘယ်သူပဲ၊ သူက ငှက်ဖျားပိုး ဦးနှောက်ထဲဝင်ပြီး ရူးသွားတာ အခုသူက ဝန်ကြီးဖြစ်နေတယ်၊ သူလာရင် တို့က အလေး ပြုနေရတယ် ” လို့ ဗိုလ်မှူးကြီးတချို့က မကျေမချမ်း ပြောပါတယ်။ သူတို့လုပ်တာမျိုး တို့ လည်း လုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ် အဲဒီကတည်း က ပေါ်နေပါပြီ။
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီးက သိန်း ၄၀ ဘုံးတာ အဲဒီခေတ်ကပါပဲ။ SAMB တို့ STD တို့ RTB တို့ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော် ကောက် ပဲသီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံတော် သစ်လုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့စတဲ့ ဘုတ်တွေဟာ ဖဆပလ သိုရှယ်လစ်တွေရဲ့ စားကျက်တွေပါပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်မဟုတ်တဲ့ ဖဆပလ တို့ရဲ့ စားကျက်လုပွဲတွေ တခြိမ်းခြိမ်း ဖြစ်ပါ တယ်။ (၁၉၅၈) ခုနှစ် ဖဆပလ အကွဲဟာ အဲဒီက မြစ်ဖျားခံပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပွဲရဲ့ မြစ်ဖျားကလည်း အဲဒီကပဲ စပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးအရသာ မြိန်မြိန် ရှက်ရှက် ခံစားနေရင်း တို့ကိုဘယ်သူ လက်ညှိုး ထိုးမလဲ၊ ဘယ်သူဝေဖန်မလဲလို့ မျက်စိ ဒေါက်ထောက် ကြည့်ပါတယ်။ ဝေဖန်ရင် သူတို့ရဲ့ “ရန်သူ” တွေ ဖြစ်ကြတော့တာပါပဲ။
ဥပဒေတွင်းရန်သူကို ရှင်းဖို့က “ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး” တာဝန်။ ထောင်ထဲ မရောက်ဘဲ တောထဲရောက်ရင် အပြတ်ရှင်း ဖို့က “ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး” တာဝန်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီနှစ်ဌာနကို ဆိုရှယ်လစ်က လက် မလွတ်အောင် လုပ်ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နေရာကို လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက သူတို့ရထားပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဗိုလ်နေဝင်းရအောင် ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကို ၊ ဘယ်လိုအသုံးချခဲ့တယ်ဆိုတာ ရှေ့မှာတင်ပြပြီး ပါပြီ။
ပြည်ထဲရေးဌာနကို ဗိုလ်ခင်မောင် လေး၊ သခင်သာခင်တို့ ကိုင်တော့လည်း ဦးကျော်ငြိမ်းချခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီပဲဆက်လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီပေါ်လစီက “တူဖြစ်ခိုက် နာနာနှက် ” ပေါ်လစီပါ။ (သူတို့ဟာ ပေအဖြစ် ခံရတော့ အသည်းနုပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်မောင် လေးက လူထုဦးလှကို ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ကန်တော့ပြီး သံဝေဂရသွားပါတယ်။ သခင်သာခင်က ပြည်ပပြေးနိုင်ဖို့ (ဗကပ) ကို အကူ အညီတောင်းသူ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်း လည်း နောက်ပိုင်းမှာ သံဝေဂ ရသွားပါတယ်။)
(ဗကပ) ဟာ ဘယ်နေရာရောက် ရောက် ရဲရဲဝေဖန်ပါတယ်။ ဝေဖန်တဲ့နည်းနာ ပြောင်းရင်သာ ပြောင်းမယ် ဝေဖန်ရေးကို မလျှော့ပါ။ ဒါကြောင့် (ဗကပ) ဟာ ဖဆပလ အစိုးရရဲ့ နံပါတ်တစ်ရန်သူ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ကတော့ ဦးနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့လို ဇဒါးနော့ဗ်ကို စွဲချက်မတင် ပါဘူး။ သူက (ဗကပ) ရဲ့ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးတောင် လုပ်ခဲ့သူပဲ။ နု – ငြိမ်းတို့လို ဗလန်းပြောလို့ မဖြစ်ပါ။ ဇဒါးနော့ဗ်၊ စတာလင် စသူတွေကြောင့် ဗမာပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ရတယ်ပြောလျှင် လူရယ်စရာပဲ ဖြစ်မှာကို သူသိပါတယ်။
သူက ရဲဘော်ဂိုရှယ်ကို ဦးတည် တယ်။ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဗသိန်းတင်တို့ရဲ့ “ဂိုဏ်းဂဏဝါဒ” ကို ထိုးနှက်တယ်။ [(စကားချပ်) ဗိုလ်နေဝင်းလည်း ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ထံမှ (ဗကပ) ၏ “ဂိုဏ်းဂဏဝါဒ” ဆိုသည်ကို ငှား၍ တရုတ်ပြည်သွားတိုင်း သုံးလေ့ရှိတယ်။ တရား ဝင်ဆွေးနွေးရာတွင်ကား မသုံးပါ။ မှတ်တမ်း မဝင်သည့် ဘေးပန်းတွင် လှိုင်လှိုင်သုံးလေ့ ရှိတယ်။
“ဂိုဏ်းဂဏဝါဒ” (ဗကပ) တွင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “ပြည်တွင်းစစ်” ဖြစ်စေတဲ့ ဂိုဏ်းဂဏအထိ ဘယ်သူ့ဆီကလာသလဲ။ ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ RBA (တော်လှန်တဲ့ ဗမာ့ တပ်မတော် ) တောခိုရတာကော (ဗကပ) ရဲ့ “ဂိုဏ်းဂဏ” ကြောင့်လား။ ဒါကို ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရေးမသွားပါ။ သူ့ကိုယ်သူ ဝေဖန်ရေး လုပ်သလိုလိုနဲ့ လျောချလိုက်တယ်။ လက်နက် နဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့နည်းဘက် သွေဖီသွားမိလို့ ဟု သုံးသပ်လိုက်တယ်။ အမှားကို တညနဲ့ တမနက်ခင်းမှာ အမှားမြင်လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) က ဦးကျော်ငြိမ်း လိုလည်း စတာလင်သေပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေရေး လမ်းစဉ်သစ်ကြောင့် အိန္ဒိယ၊ မလေး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့က ရဲရဲဝံ့ဝံ့လက်နက်ချတယ်။ (ဗကပ) က ပြည်တွင်း စစ် ဆက်တိုက်နေတယ်လို့ မရေးပါ။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ ဟိုတိုင်းပြည်တွေက သမိုင်း ကြောင်းတွေ မသိဘဲ ရမ်းတုတ်လိုက်ကြောင်း သူသိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခဏခဏ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ လက်နက်ခဲယမ်း ရေသောက်မြစ်ရဖို့ပဲ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်ဆီကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယအကြောင်း လေ့လာ ခဲ့ဟန် မတူပါဘူး။ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ပါ။
(ဗကပ) ဟာ ပြည်တွင်းစစ် နှစ် (၅၀) အတွင်းမှာ “အစိုးရက ချီးမြှင့်တဲ့” ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတွေ သိပ်ရခဲ့ပါတယ်။
“မော်စကိုတပည့်” ဘွဲ့ကို စရပါတယ်။ “ပီကင်းတပည့်” ဘွဲ့က ၁၉၆၇ နောက်ပိုင်းမှ ရပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီဘွဲ့တွေ မရှိတော့ပါ။ “ပီကင်းတပည့်” ဘွဲ့တော့ အမေရိကန်က ပြန်ယူပြီး တခြားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖဆပလအစိုးရခေတ်မှာ (သကသ) သောင်းကျန်းသူဘွဲ့ ရပါတယ်။ (နဝတ) က ပြန်သိမ်းသွားပါတယ်။ ဝ တွေ၊ ကိုးကန့်တွေ၊ ကချင်တွေ၊ ပအိုတွေ၊ မွန်တွေကို (သကသ) လို့ သွားခေါ်ရင် မိုးမီးလောင်မှာမို့ ပြန်သိမ်း သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(နဝတ) က (ဗကပ) ဆီက ပြန်သိမ်းတဲ့ထဲမှာ “အမျိုးသား သစ္စာဖောက် ” ဘွဲ့လည်း ပါသွားပါတယ်။ NLD ကို ပေးပါတယ်။ (အခုတော့ စကားပြောပွဲ လုပ်တုန်းမို့ ပြန်သိမ်းထားပါတယ်။)
မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ “ဘိန်းရာဇာ” ဘွဲ့ကတော့ (ဗကပ) ဆီက ပြန်သိမ်းပါတယ်။ တခြားဘယ်သူ့မှလည်း မပေးဝံ့လို့
သူတို့ပဲ ယူထားကြပါတယ်။ (ဗကပ) ရတဲ့ဘွဲ့ထဲမှာ “ဓမ္မန္တရာယ် ”” ဘွဲ့လည်း ပါပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာမှာ ပေးနေကျဘွဲ့ပါ။
ပြည်တွင်းစစ်ကို ဇဒါးနော့ဗ် (ရုရှားကွန်မြူနစ်)၊ ရာနာဒီဗေး (အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်) တို့ကြောင့် ဖြစ်လေဟန် ပြောကြရေးကြခြင်းဟာ (ဗကပ) ကို ပြည်တွင်းစစ် တရားခံအဖြစ် လုပ်ကြံစွပ်စွဲချင်လို့ပါပဲ။
ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ပြည်တွင်းဖြစ်စစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်ရဲ့ စစ်ပြီးခေတ် အခြေအနေကို ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်
(၁) (ဗကပ) ဟာ စစ်တိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပါတီ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကလည်း ဦးကျော်ငြိမ်း အဆိုအရဆိုရင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော် (၂၀၀၀) လောက်နဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၂၀၀,၀၀၀) လောက် ရှိတယ်။ အစိုးရတပ်ထဲမှာလည်း ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ်စတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို မလိုလားတဲ့ တပ်မှူးကြီးတွေ၊ တပ်မှူးတပ်သားတွေ ရှိနေတယ်။ သူတို့က လက်ဝဲတွေ ပြည်ချစ်ဝါဒီတွေပဲ။
(၂) ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတုန်းက အချောင်ခိုနေကြပြီး လောလောဆယ် အာဏာ ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်စုက အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်လာတယ်။
(၃) အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ဓနရှင်ပေါက်စတွေ တော်လှန်ရေးစိတ် အလွန် နိုးကြားနေချိန်ဖြစ်တယ်။
(၄) အင်္ဂလိပ် နဲ့စေ့စပ်ပြီးရထားတဲ့ “လွတ်လပ်ရေး” က စိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်နှောင်ကြိုးတွေ တန်းလန်းနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ လက်ယာအင်အားစုတွေ၊ အလိုတော်ရိတွေ၊ ဗျူရိုကရက်ကြီးတွေကို ဖဆပလ အစိုးရက ချော့ပြီးပေါင်းနေရတယ်။
(၅) ကျေးလက်မှာ စစ်လက်ကျန်လက်နက်တွေ ရှိနေတယ်။ လယ်သမားသူပုန်ဆန်တဲ့ ဓားပြဂိုဏ်းကြီးတွေ ရှိနေတယ်။
ဒီလို အခြေအနေမှာ (ဗကပ) နဲ့ တခြားတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကို တယောက်မှ မကျန်အောင် ရှင်းပစ်နိုင်ရင်တောင် ပြည်တွင်းစစ်က ပေါက်ကွဲလာမှာပဲ။
အထက်ပါ အခြေအနေမျိုး အိန္ဒိယမှာ အရှေ့တောင်အာရှ တိုင်းပြည်တွေမှာ မရှိဘူး။ အဲဒီလို အခြေအနေရှိတဲ့ ဗမာပြည်မှာ “ကိုယ်ကဦးအောင်ချရေး” ဟာ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပေါ်လစီဟူသမျှ ဦးကျော်ငြိမ်းကလို့ပြောရင် တရားမျှတမှုမရှိပါ။ ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးအကွက်ဆင်တာ သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှာ ဦးနှောက်အလှုပ်ရှားဆုံးက သူပါ။ ပြည်ထဲရေးကိစ္စ သူ့လက်သူ့ခြေပါ။ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး သူ့အခန်းအဓိက မဟုတ်ပါ။ “မူ” ကိုပဲ သူချပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးမှာလည်း “မူ” ကိုသာ ကိုင်ပြီး ဦးတင်ထွဋ်ကို လွှဲထားပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားကိစ္စကျတော့ သခင်တင် တို့ ၊ အပိုင်စားရာနယ်ပယ်ပါ။ ကုလားအုပ် ကျောပေါ် နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတစ တင်ပေး (သတင်းစာတိုက်ရိုက်ချိုး) တာမှာ သူ့ပရောဂ ပါပါတယ်။ တိုက်ရိုက်တော့မပါပါဘူး။ ဒဂုန် တာရာရဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရုပ်ပုံလွှာမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းလို့ မပြောပါ။ ခြောက်လုံးပြူး ခါးကြားထိုးထားသူလို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်ငြိမ်းက “အတိုက်အခံ ဟူသမျှ ချေမှုန်းကြ” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ် ချမှတ်သူ နဲ့ ဆော်ဩသူအဖြစ် တာဝန်ရှိပါတယ်။ (ဗကပ) ချေမှုန်းရေး အကွက်ဆင်သူအဖြစ် တာဝန်ရှိ ပါတယ်။
တခြားသတင်းစာတိုက်တွေ ရိုက် ချိုးအပြီးမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ “ပြည်သူ့ အာဏာ” ဂျာနယ်နဲ့ “ကွန်မြူနစ်နေ့စဉ်” သတင်းစာတိုက် ရိုက်ချိုးဖို့အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
ယူနီဖောင်းချွတ်ထားတဲ့ စစ်သား အုပ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတိုက် ရိုက်ချိုးလို့ ဖြစ်ပေမယ့် (ဗကပ) ကို အဲဒီလိုလုပ်လို့ မဖြစ်တာ ဦးကျော်ငြိမ်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်နေဝင်းကိုအရဆွယ်ပြီး စစ်တပ်အင်အားနဲ့ (ဗကပ) ဌာနချုပ် (ပုံနှိပ်တိုက်ရှိတယ်) ဝင်သိမ်းဖို့ စည်းရုံးခဲ့တာပါ။ (ဗကပ) ဌာနချုပ်မှာ လက်နက် အပြည့်အစုံနဲ့ တပ်ရင်းတရင်း လျှို့ဝှက်ချထား တယ်လို့ ဗိုလ်နေဝင်းကိုပြောပြီး စည်းရုံးတာပါ။
ဗိုလ်နေဝင်းက “ကိုကျော်ငြိမ်း ဒီ အပေါင်ဆိုင် (ဗကပ ဌာနချုပ်ဟာ အရင်က အပေါင်ဆိုင်) ပေါ် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပြီး တပ်ရင်း တရင်း နေနိုင်ပါ့မလဲ” လို့ ပြန်ပြောရတယ်လို့ ဗိုလ်နေဝင်းကိုယ်တိုင် ပြောပါတယ်။ ။
တကယ့်အဖြစ်မှန်က ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတိုက်တွေ ရိုက်ချိုးခံရတဲ့နေ့က ယူနီ ဖောင်းချွတ်လူအုပ်ကြီးလာရင် ရင်ဆိုင်ဖို့ ပါတီ ဌာနချုပ်က ရဲဘော်တချို့နဲ့ စမ်းချောင်းလူငယ် တွေပဲ စုစည်းထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ထိပ် တိုက်မတွေ့ပါ။
နောက်မှလိုရမယ်ရ သခင်တင်ထွန်း အစီအစဉ်နဲ့ ပျဉ်မနားကရဲဘော် လေးငါးယောက် ခေါ်လိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်။ လက်နက် ယူလာလို့မဖြစ်ပါ။
(ဗကပ) ကို ချိုးဖို့ဆိုရင် ယူနီဖောင်း ချွတ်လူအုပ်နဲ့ မဖြစ်ပါ။ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် များတဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ တပ်တွင်း ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ မုချတိုင်ပင်ရပါမယ်။ လက် တွေ့အလုပ်ဖြစ်ရေးဝါဒသမား ဗိုလ်နေဝင်းက (ဗကပ) နဲ့တွေ့တုန်း အပိုအမိုပြောတယ်ထား မတ်လ ၂၈ အလစ်ဖမ်းပွဲ စီမံကိန်းကို သူသိ နိုင်ပါတယ်။ တခြားဆိုရှယ်လစ်ဗိုလ်တွေလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ ။
အဖြစ်အပျက်က (၅၄) နှစ် ရှိပါ တော့မယ်။ ချေးခြောက်ရေနူးနေတာ မဟုတ် ပါ။ အဲဒီခေတ်က ဆိုရှယ်လစ်ပါတီထိပ်သီးတွေ အခုမရှိတော့ပေမယ့် ဆိုရှယ်လစ်ဗိုလ်တွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ တစုတစည်းတည်းတော့ မဟုတ်၊ ဟိုရောက်ဒီရောက်ပါ။ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ (တချို့ အစိုးရပါတီ၊ တချို့ အတိုက်ခံ ပါတီ) ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်က ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ ရှင်းမယ်ဆိုရင် သူတို့ အကူအညီ ရဖို့ လိုလို့ ရေးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာလေရှုပ်လေဖြစ်တဲ့ ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်
ချာချီအဖို့ကတော့ BIA. PBF အနွယ် ဖဆပလဆိုရင် ဝဲဝဲယာယာ သူတို့နဲ့ မစေ့စပ်ရေးပဲ။ စေ့စပ်ရင် “စောစိန်မော် ” ကိုပဲ စိတ်ချတယ်။ သူတို့က အလိုတော်ရိဂိုဏ်း၊ ပြည် တွင်းက အလိုတော်ရိအားလုံး သူတို့အောက် မှာ ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့စေ့စပ်ရင် အင်္ဂလိပ် အတွက် ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ မြင်တယ်။
ဖဆပလနဲ့စေ့စပ်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ပေးခဲ့တာကို အင်္ဂလိပ်ခေါင်းမာဂိုဏ်း ချာချီ၊ တောင်တန်းသားမိတ်ဆွေ စသူများက မကျေနပ်ဘူး။ ပြည်တွင်းအလိုတော်ရိတွေကလည်း အင်္ဂလိပ်က သူတို့အပေါ် သစ္စာဖောက်သွား တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ချာချီဟောကိန်းထုတ်တဲ့ “ပြည် တွင်းစစ် ” မျိုး မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် “လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေး” ပြိုကွဲပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့၊ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ကျယ်ပြန့်သွားတယ်။ ရည်မှန်းချက်အမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်သွားတယ်။
ကွန်မြူနစ်နဲ့ တခြားလက်ဝဲ အင်အားစုတွေက ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်တာ (အဲဒီထဲမှာလည်း အမြင်တညီတည်း မဟုတ် ) ၊ လူမျိုးစု အင်အားစုတွေက ရည် ရွယ်ချက်တမျိုး (သူတို့လည်း တညီတည်းမဟုတ် ) ၊ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဟာ တခုကောင်းနဲ့ မရှင်းနိုင်ပါဘူး။ ဘက်စုံဖြေရှင်းမှရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူ့ဘက်ကလည်း ဒီလိုပဲ။ ဖဆပလအစိုးရ (၁၀) နှစ်မှာ ဦးနု တမျိုး၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းကတမျိုး၊ စစ်တပ်ကတမျိုးပဲ။ ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ ဖြေရှင်းချင်ပုံချင်း တညီတည်း မဟုတ်ဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ စစ်တပ်က အပြတ်ချေမှုန်းရေးက တပြားသားမလျော့ဘူး။
နောက် နေဝင်းရဲ့ စစ်အစိုးရ ဖြစ်လာတော့ ပါလီမန်အစိုးရလို ဟိုညိုဒီညှိ လုပ်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။ ဗိုလ်နေဝင်းခေါင်းငြိမ့်ရင် ပြီးတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ခေတ်မှာ နှစ်ခါတောင် “စေ့စပ် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။
“ပြည်တွင်းစစ်” မှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားအင်အားစုများကိစ္စမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိပြန်တယ်။
ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်မှာ စိတ်ဝင်စားသူက ကြာလေများလေ ဖြစ်လာတယ်။ ချာချီနဲ့ “တောင်တန်း သား မိတ်ဆွေများ” ချည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ချာချီက မရှိတော့ဘူး။ သူ့ပါတီကလည်း ဗမာပြည်အရေးကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် သဘောမထားတော့ဘူး။ “တောင်တန်း သားမိတ်ဆွေများ” ကတော့ အိုနာကျိုးကန်း ဖြစ်သူပဲ ကျန်တယ်။ KIO က ဦးဘရန်ဆိုင်း ၁၉၈ဝ နှစ်တွေထဲမှာ အင်္ဂလန်သွားတွေ့တော့ အိုမင်းမစွမ်းတွေ၊ အင်္ဂလိပ် အထက်လွှတ်တော်မှာ လော့ဒ် (Lord ) တွေ ဖြစ်နေ တယ်။ ဗမာပြည်အရေး သူတို့ဦးနှောက်ထဲမှာ မရှိတော့ ဘူး။ သိပ်လည်း စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။
၁၉၉ဝ နှစ်တွေမှာ ပြည်ပက စိတ်ဝင်စားသူတွေက အလွန်များလာတယ်။ (ဗကပ) အနေနဲ့ အားလုံးကို မသိပါ။ သိတာလည်း မဖော်ပြလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ရဲဘော်တွေဟာ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စခန်းသွားနေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ပြချင်တာက “ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ” ဖြေရှင်းရေးမှာဝင်ပြီး သြဇာပေးချင်တဲ့၊ ပါဝင်ပတ်သက်ချင်တဲ့၊ အကြံ ပေးချင်တဲ့၊ ဆေးမြီးတိုပေးချင်တဲ့လူတွေ များတဲ့အကြောင်းပါး ဆေးမြီးတိုနဲ့တည့်သွားရင် ဂုဏ်ယူ ပြောဆို၊ မတည့်လို့သေရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ ပညာတခုတော့ တိုးတာပဲလို့ သဘောထားမယ့် သူတွေလည်း များပါတယ်။ အခုခေတ်က စစ်အေးလွန်ခေတ်ပါ။ သတင်းနည်းပညာ ( IT ) ခေတ်။ ဟိုခေတ် ဒီခေတ် ဆိုတာကြီးပါ။
ဗမာပြည်ကလူတွေ ပြည်ပထွက်နေတာလည်း များပါတယ်။ အိမ်ခင်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။
အခု ပြည်တွင်းစစ်ကို နိုင်ငံခြားစစ်မျက်နှာတခုဖွင့်ပြီး တိုက်နေကြရပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ကတိုက်ပွဲ၊ စစ်အစိုးရက တင်လိုက်တဲ့သတင်းမှားတွေ စသဖြင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။
တမယ်ကောင်း ဆေးတဖုံနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ မရှင်းနိုင်တော့ပါဘူး။
အရှုံးအနိုင်ပြတ်မသွားဘဲ နှစ် (၅၀) ကျော် ရှည်ကြာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းက နှစ်ဘက် စလုံးမှာ ရှိပါတယ်။ အပြတ်ချပစ်လိုက်ဖို့ နှစ်ဘက်စလုံးက အားထုတ်ကြတာပါပဲ။ ဖဆပလ က (၆) လအတွင်း အပြုတ်တိုက်ရေးလုပ်သလို (ဗကပ) ကလည်း “၂ နှစ်အတွင်း စစ်နိုင်ရေး” လုပ်ပါ တယ်။ ဘယ်သူမှ မအောင်မြင်ပါ။
ဖဆပလအစိုးရဘက်ကလည်း PVO, RBA နဲ့ KNU ကိစ္စတွေ ဆက်တိုက်လို ပေါ်နေလို့ (ဗကပ) ကို အပြုတ်တိုက်ပစ်ဖို့ မလွယ်ပါ။ ရန်ကုန်အစိုးရအဖြစ်တောင် ရောက်သွားပါတယ်။ (ဗကပ) ကလည်း ကိုရီးယားစစ် ဖြစ်တဲ့နှစ်က “၂ နှစ်အတွင်း စစ်နိုင်ရေး” လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ပြီး မဟန်တော့လို့ ရပ်လိုက်ရပါတယ်။
အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တိုက်ကြ တဲ့ အင်အားစုတွေမှာ ဘုံရန်သူရှိပေမယ့် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် (အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်) မရှိပါ။ အခြေအနေက ဘယ်လိုပဲပေးနေပါစေ ရန်ကုန် အစိုးရကို အပြုတ်ချပစ်ဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ပါ။
ဘာကြောင့် အခွင့်မသာသလဲ ဆိုတာဟာ ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးရဲ့ ထူးခြား ချက်ကြောင့်ပါ။ ဘာတွေထူးခြားသလဲ ဥပမာတချို့ ပြပါမယ်။
(ဗကပ) PVO. RBA တို့ တပ် ပေါင်းစုဖွဲ့မိပါတယ်။ လက်ဝဲတပ်ပေါင်းစုလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းစဉ်တွေတူအောင် ညှိမရပါ။ (အလံနီကို တပ်ပေါင်းစုအင်အားထဲ မထည့်နိုင်တာက သူ့ရဲ့ ဂိုဏ်းဂဏကြောင့်ပါ။ အလံနီဟာ ဂိုဏ်းတခုအဖြစ်ကနေ လူထု အခြေခံရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ် ဘယ် တုန်းကမှ မတက်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်း တဲ့အထိ ဂိုဏ်းကလေးအဖြစ်က မတက်ခဲ့ပါ။ နေဝင်းစစ်အုပ်စုက တောထဲမှာ တမင်မွေးထား တယ်လို့ ထင်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူ့ကိစ္စကို ရေးမှာမဟုတ်လို့ ချန်ခဲ့ပါမယ်။)
တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေဟာ ကျေးလက်ကို အခြေခံရတော့ မြေယာနဲ့ ကျေးလက်ပေါ်လစီ ရှိရပါတယ်။ (ဗကပ) ပေါ်လစီကတမျိုး၊ PVO ပေါ်လစီကတမျိုး ဖြစ်ကြပါတယ်။
(ဗကပ) ပေါ်လစီက ဆင်းရဲလယ် သမားနဲ့ ကျေးလက်ပစ္စည်းမဲ့အလွှာကို အလွန်အကျွံမှီခို အလုပ်အကျွေးပြုထားတဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်။ “မြေတွေ အကုန်သိမ်း အကုန်ဝေ” ဆိုတော့ အလတ်လယ်သမားနဲ့ ချမ်းသာလယ်သမားပိုင် မြေတွေပါ အသိမ်းခံ ရပါတယ်။
မြေပြန်ဝေတော့ ဆင်းရဲတွေက ဝေစုများများ ရသွားပါတယ်။ မြေမဲ့ယာမဲ့ ကလည်း မြေမရှိရာက မြေပိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အလတ်နဲ့ချမ်းသာကတော့ သိမ်းသွားတဲ့မြေ ထက် လျော့ပြီးရရုံမက လက်ငုတ်ကောင်း တွေ လက်လွတ်ပြီး မြေညံ့တွေရကြပါတယ်။
“ဆင်းရဲ အခြေခံ၊ အလတ် မဟာမိတ်ပြု၊ ချမ်းသာကြားထား၊ မြေရှင် ဦးတည်တိုက်ရေး” မူနဲ့ မကိုက်ပါဘူး။ ဆင်းရဲ အခြေခံမိပေမယ့် အလတ်မဟာမိတ်ပြုရေးနဲ့ ချမ်းသာကြားထားရေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။
PVO ရဲ့ လမ်းစဉ်က တမျိုးပါ။ အလတ်နဲ့ချမ်းသာလယ်သမား အလုပ်အကျွေး ပြုရေး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆင်းရဲနဲ့ မြေမဲ့ယာမဲ့ လယ်သမားကို ဒုံရင်းအတိုင်း ရှိစေပါတယ်။
ဒီလို ပေါ်လစီနှစ်ခု စင်ပြိုင်ဖြစ်နေ တာနဲ့ နယ်မြေအငြင်းပွားမှုတွေ ပေါင်းမိတော့ အချင်းချင်း စစ်တိုက်ကြရတဲ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ရေနံမြေက ကိုယ့် လက်ထဲရောက်လုနီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ပိုင် ကုမ္ပဏီကြီး ( BOC) က “နုအက်တလီ စာချုပ်” အရ တရားဝင်ရှိနေပါတယ်။ ဒီ ကုမ္ပဏီကို နိုင်ငံပိုင်လုပ်ရေးပေါ်လစီမှာ PVO နဲ့ (ဗကပ) မကွဲပါ။ (ဦးဘဖေက ဗိုလ်နေဝင်းကို စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပွဲလုပ်ဖို့ BOC ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ပြီး ချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်ကပါ။ ဗိုလ်နေဝင်း မလုပ်ရဲပါ။ ဦးဘဖေကို ဖွင့်ချပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက ဦးဘဖေ နာလန်မထူတော့ပါ။) ၊
RBA နဲ့ (ဗကပ) က ပေါ်လစီ ဆိုင် ရာ အငြင်းပွားမှုမရှိပါ။ တောထဲရောယောင် ပါလာတဲ့ ဗိုလ်တင်ထွန်းအောင်တို့ ကြံစည်မှုကို ဖြိုခွင်းရတာပဲ ရှိပါတယ်။
KNU နဲ့ ပြဿနာကျတော့ ပိုပြီး ရှုပ်ပါတယ်။ PVO နဲ့ မြေယာပေါ်လစီ ကွဲတာက ပြင်ဆင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ (ဗကပ) က လွန်နေတာလျော့၊ PVO ကလည်း ဆင်းရဲ လယ်သမား အခြေခံရေးလုပ်လိုက်တော့ ပြေလည်သွားပါတယ်။
KNU နဲ့ ပြဿနာကတော့ အခု အထိ ပြေလည်တယ် ပြောမရပါ။ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ လူမျိုးစုအခြေခံ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေနဲ့ကျတော့ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်ပါတီက လူတန်းစားနဲ့ လူတန်းစားတိုက်ပွဲကို ယုံကြည်ပါတယ်။ လူမျိုး တိုင်းမှာ လူတန်းစားကွဲပြားမှု ရှိတယ်လို့ သတ် မှတ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးဟာ ဘယ် စနစ်ထဲရောက်နေသလဲ။ ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင် အဆင့် ရောက်နေရင် ကျွန်ပိုင်နဲ့ ကျေးကျွန် လူတန်းစား ရှိမှာပါပဲ။
ပဒေသရာဇ်စနစ် အဆင့်ဆိုရင် ပဒေသရာဇ်မြေရှင်နဲ့ လယ်သမားလူတန်းစား ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းကုန်ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့်ရောက်နေရင်တော့ ဓနရှင်နဲ့ အလုပ် သမား၊ အတိုးကြီးစားနဲ့ မြီစားရှိမှာပါပဲ။
အဲဒီအယူအဆကို လူမျိုးစုအဖွဲ့ တိုင်းလောက်က လက်မခံပါ။ သူတို့မှာ လူမျိုးပဲ ရှိတယ်။ လူတန်းစားမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ရှမ်းက ရှမ်းအမျိုးသားရေးဝါဒ၊ ကချင်က ကချင် အမျိုးသားရေးဝါဒ ဒါပဲလိုတယ်လို့ ယူဆကြ ပါတယ်။ ရန်သူက ဗမာလူမျိုးပဲလို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ (နောက်တော့ ဗမာစစ်အစိုးရလို့ ပြင်ပါတယ်။)
KIO ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တပ် ပေါင်းစုဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ဒီကိစ္စပေါ်ပါတယ်။ သူတို့က (-ism ) (ဝါဒ) တွေကြောင့် ခက်နေ တာလို့ ပြောပါတယ်။ သူပြောချင်တာက (Communism. Socialism) ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ အဲဒီဝါဒတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ခင်ဗျားတို့လည်း – ism ရှိတာပဲဆိုတော့ မရှိဘူး ငြင်းပါတယ်။ Nationalism လေလို့ပြောမှ ဟုတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ။
ဒါတွေကြောင့် ဗမာပြည် တော်လှန် ရေးမှာ “ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ” လို့ ကွန်မြူနစ် တွေကပြော၊ သူတို့က“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ” လို့ ပြော မလိုအပ်ပဲ ငြင်းနေကြရပါတယ်။
NDF ဆိုတာ ဗမာမပါပဲ ဖွဲ့ကြ ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ (ဗကပ) က ဗမာထဲမှာ လူတန်းစားရေးလုပ်တာတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ ဗမာချင်းတိုက်ပွဲမှာ အမြတ်ထုတ်နိုင်လို့ပါ။ သူတို့ကတော့ အမျိုးသားရေးပဲ လုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗမာက BIA လုပ်ခဲ့သလို သူတို့လည်း – IA တွေ ဖွဲ့ကြပါတယ်။ (SSIA. KIA စသဖြင့်)
အခုတော့ မျိုးဆက်သစ်တချို့က ဗမာမပါရေးသာ မကတော့ပါ။ ဗမာစကား မပြောရေး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဘုံဘာသာ လုပ်ရေးအထိပြောသံ ကြားရပါတယ်။ စိတ်ကူး ယဉ်တာပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်ခွင့် လူတိုင်းမှာရှိလို့ ဗွေမယူနိုင်ပါ။
တခါတုန်းက (KNUP) ဖွဲ့ပါတယ်။ သူတို့က လူတန်းစားနဲ့ လူတန်းစားတိုက်ပွဲ သဘောတရားကို လက်ခံပါတယ်။ (ဗကပ) နဲ့ အတော်ကလေး နီးစပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ။
ကွန်မြူနစ်တို့ရဲ့ အယူအဆက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ ပေါ်လစီတခုခုကို လုပ်နေတာလို့ ယူဆပါတယ်။ အသိရှိစွာ ဖြစ်စေ၊ အသိမဲ့စွာဖြစ်စေ လုပ်နေကြတာချည်း ပါပဲ။ ပေါ်လစီတိုင်းဟာလည်း လူတန်းစား တခုခုကို ကိုယ်စားပြုတာ အလုပ်အကျွေးပြုတာ ချည်းပါပဲ။ တမျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါ။ စစ်အစိုးရက “အမျိုးသားရေး တာဝန်” “အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” လို့ ပြောနေ တာမျိုးပါပဲ။
“ရန်ကုန်အစိုးရ ဖြစ်နေပြီ” ပြုတ်ကျ ဖို့ တဲတဲကလေးလိုတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီ တုန်းက (ဗကပ)၊ RBA. PVO. KNU ပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မသိမ်းသလဲလို့ မျိုးဆက်သစ် တချို့က ပြစ်တင်ချင်ကြပါတယ်။
ပြောသလောက်မလွယ်ပါ။ စဉ်းစား နိုင်အောင် အဲဒီတုန်းက အခြေအနေ လိုသလောက် တင်ပြပါမယ်။
၄၈ ခုနှစ် တနှစ်လုံး ပါတီက ထိုးစစ် တွေ ကြံ့ကြံ့ခံနေရပါတယ်။ ထိုးတဲ့တပ်တွေက ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ဂေါ်ရခါး တပ်တွေပါ။ သူတို့ပဲ ဖဆပလ အစိုးရအမိန့်နာခံပါတယ်။ ဗမာတပ်တွေက တချို့ တောခို၊ တချို့ ကပျက်၊ ဗိုလ်တချို့က သုံ့ပန်းဖြစ်၊ ဗိုလ်တချို့က “စစ် ဆိုရင် ရေတောင်စစ်မသောက်ချင်ဘူး” လို့ ပြောပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်ပါတယ်။
၄၉ မှာ ကရင်တပ်တွေ တောခိုမှ (ဗကပ) အသက်ရှူချောင်ပါတယ်။ ကရင်တပ် တွေ မန္တလေးတက်လာပါတယ်။ မန္တလေး ရောက်ခါနီး မြစ်ငယ်တံတားရောက်တော့ တန့်သွားပါတယ်။ အစိုးရတပ်၊ PVO နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်တပ်တွေက မြစ်ငယ်တဖက်ကမ်းက ခံနေပါတယ်။
ဦးစီးလာတဲ့ ကရင်တပ်မှူးတွေဆီ ပါတီက စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစု ယာယီဖွဲ့ဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အစိုးရ ဘက်က တိုက်နေတဲ့ PVO တပ်ကို (ဗကပ၊ PVO ၊ ကရင်) စစ်ရေးပူးပေါင်းပြီး မန္တလေး အရယူဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ PVO က ဆိုရှယ် လစ်ကို မုန်းတီးနေလို့ ပထမတော့ လက်ခံသလို ပြန်စာပေးပါတယ်။
တရားဝင် သုံးဖွဲ့ လက်မှတ်ထိုး ကြေညာချက်ထုတ်မယ်လုပ်တော့ PVO က လိပ်ပြာမသန့်လို့ နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။ (ဗကပ) နဲ့ ကရင်တပ်ပဲ လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန် လိုက်ရပါတယ်။ တခုကောင်းသွားတာက PVO က မန္တလေးစစ်မျက်နှာကနေ သူ့ သဘောနဲ့သူ ဆုတ်သွားပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်နဲ့ ကရင်တပ်ကို ခံမတိုက်ပါ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရတပ် (ချင်းတပ် ) နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်တပ်က မန္တလေးက မခံဝံ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ပဲ မန္တလေး သိမ်းမိပါတယ်။
KNU ထူထောင်မယ့် ကော်သူ လေပြည်ထဲမှာ မန္တလေးမပါပါ။ ကရင်က မန္တလေးကို ကြာရှည်သိမ်းထားဖို့ လာတာ လည်း မဟုတ်ပါ။ မေမြို့မှာ လက်နက်ဖြုတ် အဖမ်းခံထားရတဲ့ ကရင်တွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ပဲ လာတာပါ။ သူတို့ရဲ့ စစ်ရေးတာဝန်ပြီးတော့ ပြန်ပါတယ်။
(ဗကပ) ကလည်း အာဃာတ မထားဘဲ လက်တွဲဖို့ ဦးအောင်ကမ်းလှမ်း ပါတယ်။ “ရန်ကုန်အစိုးရ” ဘဝ ရောက်သွား ရတာ မန္တလေး ကျသွားလို့ပါပဲ။
နောက်တော့ အစိုးရက မန္တလေး ပြန်သိမ်းပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ သိမ်းရာမှာ PVO တွေ ပါလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးကို တော်လှန်ရေးတပ်က တခါထပ် သိမ်းပါတယ်။ အစိုးရတပ်ထဲက ဗိုလ်လှဖေတို့ အင်အားတွေရယ် (ဗိုလ်လှဖေဆိုတာ ရဲဘော် ချစ်ကောင်း၊ ရဲဘော်အုန်းမောင်၊ မန်းဝင်းမောင် တို့ရဲ့ အိန္ဒိယခရီးမှာပါတဲ့ ဗိုလ်လှဖေပါ။) PVO ရယ်၊ (ဗကပ) ရယ် သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီး သိမ်းတာပါ။ ဒါက နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုပါ။ မန္တလေးမှာ ကြာကြာမနေနိုင်ပါ။ ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
စစ်ရေးသဘောတူညီချက် ယာယီ ယူပြီး မန္တလေးသိမ်းသလို ရန်ကုန်သိမ်းလို့ မဖြစ်ပါ။ အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှိမှ ဖြစ်ပါမယ်။ ရန်ကုန်က မြို့တော်ပါ။ အင်္ဂလိပ် စစ်မစ်ရှင်လည်း ရှိပါတယ်။ သံရုံးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ “ရန်ကုန်သိမ်းမိခဲ့သော် ” ဆိုတာနဲ့ စဉ်စားကြည့်ပါ။
(ဗကပ) က အသံလွှင့်ရုံသိမ်းပြီး “နု အက်တလီစာချုပ် ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဗြိတိသျှ စစ်မစ်ရှင်ထွက်သွားပါ။ BOC နိုင်ငံ ပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီ။ မြေရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ “လယ်လုပ်သူတွေလယ်ပိုင်ကြ” လို့ ကြေညာ တယ် ဆိုပါတော့ KNU သဘောတူပါ့မလား။
နောက်တမျိုး KNU က အသံလွှင့် ရုံသိမ်းပြီး ကော်သူးလေပြည် ထူထောင် ကြောင်းကြေညာ၊ ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယထဲ ပြန်ဝင်မယ်လို့ပြော၊ ကော်သူးလေပြည်ထဲ ဘယ်ဒေသတွေပါတယ်လို့ ကြေညာရင် (ဗကပ) ကရော၊ တခြားအဖွဲ့တွေ၊ ပါတီတွေ ကပါ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကော်သူးလေ ပြည်ရဲ့ အဝန်းအဝိုင်းကို KNU တွေက ပြော ထားပြီးသားပါ။ လျှို့ဝှက်ချက် မဟုတ်ပါ။
ဒါက ၁၉၄၉ ကို ဥပမာပေးတာပါ။ ၁၉၆၉ ဦးနုတို့တောခိုတော့ တရုတ်ပြည်က ဆင်းလာတဲ့ အနီလှိုင်း အရှေ့တောင်အာရှ မပြန့်အောင် ထိုင်းဗမာနယ်စပ်မှာ တာရိုးကြီး တည်ဆောက်ပြီး ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ကြတယ်။
(ဗကပ) က အနီလှိုင်းစီးနေတယ်။ ဦးနုတို့က အနီလှိုင်းတားနေတယ်။ ဒါလည်း အနိမ့်ဆုံး လုပ်ငန်းစဉ် မရှိတာကြောင့် ဖြစ်တာပဲ။ စစ်အေးခေတ်မှာ အဲဒီလို အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ် ရှိဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။
နောက် ဦးနုတို့၊ ဗိုလ်လက်ျာတို့ အခက်အခဲတွေ့တယ်ဆိုတာ ကြားပါတယ်။ သူတို့မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက် ဖြစ်နေပြီ။ KNU နဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကြားပါ တယ်။ ဒါလည်း အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ် သူတို့ထဲ မရှိကြလို့ပါပဲ။
လက်နက်ကိုင် တိုက်နေသူများမှာ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်မရှိရင် ပြည်တွင်းစစ်က တာရှည် ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေတွင်းက အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်း လိုက်နေသူများမှာ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်မရှိရင် ဒီမိုကရေစီ ရေစုန်မျောပါမယ်။
၁၉၈၈ က သာဓကကိုပဲ ကြည့်ပါ။ (ယာယီ) (ကြားဖြတ်) အစိုးရ မဖွဲ့နိုင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီ ဖခင်ကြီးကတမျိုး၊ ရာသက်ပန် ဝန်ကြီးချုပ်ကတဖုံ ဖြစ်ပြီး စစ် အုပ်စုကပဲ စားသွားပါတယ်။
ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်အပေါ် ကမ္ဘာ့စနစ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ဟာ “ပြည် တွင်းဖြစ်စစ်စစ်” ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ပကတိအခြေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းပကတိ အချက် အလက်တွေကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပါ။ ဘယ်သူ့ပယောဂမှ မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ စနစ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတန်သလောက် ရှိပါတယ်။
ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ကမ္ဘာ့စနစ်သုံးမျိုးရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးစနစ်က နယ်ချဲ့ ကမ္ဘာ့ စနစ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နေဝင်ချိန်စနစ်ဖြစ်လို့ သိပ် ကြာကြာ မဖြတ်သန်းရပါဘူး။ ချာချီတို့ ဒေါ်မန်စမစ်တို့က အသိရှိစွာဖြစ်စေ၊ အသိ မဲ့စွာဖြစ်စေ လက်နက်တွေတော့ ဖြန့်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို လက်နက်ရှိသူမှ တိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယစနစ်က စစ်အေးခေတ် ကမ္ဘာ့စနစ်ပါ။ အစ အလယ် အဆုံး ဖြတ်သန်း ခဲ့ရပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်ကို ဖြတ်သန်းကြ တာမှာ တိုင်းပြည်တခုနဲ့တခု မတူပါဘူး။ ထိုင်း က တမျိုးပါ။ အမေရိကန်ဘက် ပြတ်ပြတ်ရပ်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ နောက်ကျမှ တဖြည်းဖြည်း ခွာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ ကြားနေဂိုဏ်း ထဲမပါခဲ့ပါ။ အခု ပုံစံသစ်အာဆီယံ (ASEAN) ခေတ်မှာတောင် အမေရိကန်နဲ့ပဲ နီးစပ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်ကတော့ တမျိုး။ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ကြား နေရတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့ ထိုင်း လုပ်သလိုလုပ်လို့ မရပါဘူး။ ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်တွေရဲ့ အစပိုင်းအထိ အမေရိကန်နဲ့ ရင်းနှီးလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြတ်ပြတ်လည်း မရပ်ရဲပါ။ အိန္ဒိယ (နေရူး) နဲ့ တရုတ် (ချိုအင်လိုင်း) တို့ နှစ်ဘက်ညှပ်ပြီး ဆွဲဆောင်လို့ ဘက်မလိုက်ကြားနေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်း စွာ ယှဉ်တွဲနေရေး မူကြီး (၅) ချက်ကို ကမကထ ပြုသူထဲ ပါလာပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ အတွက်တော့ အကျိုးရှိပါတယ်။ အမေရိကန် ရော ဆိုဗီယက်ပါ ကြားနေတာကို နှစ်သက်ကြ တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်က မနှစ်သက်ပါဘူး။ ကြားနေတယ်ဆိုတာ သိက္ခာ မဲ့တာပဲလို့ သူကထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ အမေရိကန်ဂိုဏ်း၊ ဆိုဗီယက်ဂိုဏ်းနဲ့ ကြားနေ ဂိုဏ်းကြီး ရှိနေတာ ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တစုံတရာ ထိန်းသိမ်းနိုင်တာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဗမာပြည်အစိုးရတွေမှာ ပြည်တွင်း စစ်တိုက်ဖို့ လက်နက်ရေသောက်မြစ် မခက်ခဲ ပါဘူး။ ရန်ကုန်အစိုးရခေတ်ကပဲ ယာယီခက်ခဲ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလည်း အိန္ဒိယက ဝင်ဖြေရှင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ လုံးဝမခက်တော့ပါဘူး။ ငွေရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်။
(ဗကပ) အတွက်ကတော့ စစ်လက် ကျန် ဂျပန်လက်နက်တွေ ဟောင်းမြင်းပျက်စီး တော့၊ ကျည်ဆံမရှိတော့ ကြာလေခက်လေ ပါပဲ။ လက်နက်တလက်၊ ကျည်တတောင့်၊ ငွေ တကျပ် ပြည်ပ ဘယ်ဆီကမှ မရခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဇဒါးနော့ဗ် မြှောက်ပေးတာဆိုရင် သူတို့ကို ဆိုဗီယက်က ကူရမှာပေါ့။ မကူပါဘူး။ (ဗကပ) ကို ကူတာ အသက်ဆက်ပေးတာဟာ ဖဆပလ အစိုးရပါပဲ။ ပြည်သူ့ရဲဘော်တို့၊ RBA တို့ ပေါ်လာလို့၊ KNU ပေါ်လာလို့ ဂျပန်သေနတ် တွေ အနားပေးပြီး အင်္ဂလိပ်လက်နက်နဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့တာပါပဲ။ လက်နက်တလက်၊ ကျည်တတောင့်၊ ငွေတကျပ်ကို ကိုယ်အား ကိုယ်ကိုး ရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဆီကမှ မရပါဘူး။
ကွန်မြူနစ်ချင်း ကျိတ်ပြီးပေးမယ် မထင်ပါနဲ့။ တီးတိုးကဆိုရင် တပ်မဟာ တခုစာလက်နက် ဖဆပလအစိုးရကိုပဲ ပေးပါ တယ်။ ယူဂိုဆလဗ်စိန်ပြောင်းကို အတော် ကြာကြာ သူတို့စစ်တပ် သုံးခဲ့တာပါပဲ။
ကရူးရှက်ဗ်ကလည်း အတွေးအခေါ် အရ၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖဆပလအစိုးရကိုပဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကရူးရှက်ဗ် ကို ဦးကျော်ငြိမ်းက အမွှမ်းတင်ပြီး ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) က ကိုးကွယ်ပါတယ်။
တီးတိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ကရူးရှက်ဗ်ဖြစ်ဖြစ် ဖဆပလအစိုးရကို ကူတာက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အကျိုးကြည့်ပြီး ကူတာပါ။ ဆိုရှယ်လစ်ဂိုဏ်း အတွင်းက ပဋိပက္ခမှာ ဗမာပြည်ကို အသုံးချ တာပါပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မူကြီး (၅) ချက် ချမှတ် တာကို ကြိုက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူကို အကျိုးပြုတာဖြစ်လို့ လိုလားနှစ်သက်ပါတယ်။
မူကြီး (၅) ချက် ကျေးဇူးကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့တရုတ် ခဏထပြီး စစ်တိုက်ကြ တော့တောင် ဗမာပြည်ကို ဘယ်သူကမှ ယမ်းချေးမပန်းခဲ့ပါဘူး။ ကြားညပ်မခံရလို့ မူကြီး (၅) ချက်ကို ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သမိုင်းရဲ့ လှည့်ကွက် ပြောရ မလား၊ ရယ်ရတယ် ပြောရမလား (ဗကပ) လက်နက်တွေ ဒလဟောရအောင် လုပ်ပေး တာက ဗိုလ်နေဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တိုက်နေ သူတိုင်း လက်နက်ရချင်တာ ဓမ္မတာပါ။ ရရင် ဘယ်သူမယူဘဲနေမလဲ။ ယူတာပေါ့။ ဗိုလ်နေဝင်း တွက်ကိန်းမှားလို့ (ဗကပ) လက်နက် တွေ မကြုံဖူးအောင် ရပါတယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းဟာ တွက်ကိန်းသမား ပါ။ ဗိုလ်အောင်ကြီးပြောသလို ၁၉၆၇ ခုနှစ်က ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည် ဆန့်ကျင်ရေး၊ တရုတ် လူမျိုး ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်တာဟာ နေဝင်းရဲ့ ခပ်လွယ်လွယ် ခပ်ပေါ့ပေါ့ မှတ်ချက်ပေး လိုက်တဲ့စကားကို အောက်ခြေက ပေါ်လစီ လုပ်လိုက်လို့ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အမှု ပေါ့အောင် ပြောတာပါ။ ဓားစာခံရှာပြီး နေဝင်း လွတ်အောင် လုပ်ပေးတာပါ။
ဗစိန် ထွန်းအုပ် ဂိုဏ်းသားကနေ ဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်တာ၊ ဦးဘဖေ၊ ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) တို့ အာဏာသိမ်းဖို့ အခါပေးတာကို ငြင်းပယ် တာ၊ ၁၉၅၈ မှာ ခဏပဲ အာဏာသိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေး စစ်တန်းလျားပြန်တာ၊ ၁၉၆၂ မှာကျမှ အပြီးအပိုင် မလွှတ်တမ်း အာဏာသိမ်းတာ၊ ဒါတွေလုပ်တာဟာ တွက် ကိန်းသမားမှ လုပ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ကောင်း ရွေးတတ်တာပြတဲ့သာဓကတွေပါပဲ။
၁၉၆၇ ခုနှစ်က ကိစ္စဟာ ဆန်ကိစ္စနဲ့ အငတ်ဘေးကြောင့် ထွက်ပေါက်ရှာတာပဲလို့ ပြောကြတာဟာ နေဝင်းကို ကာကွယ်ကြ တာပါ။ အဲဒီ ဆန်ကိစ္စက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန်ကိစ္စက လူထုပါအောင် လှုံ့ဆော်ဖို့သုံးတဲ့ ပရိယာယ်ပါ။ နေဝင်းက တွက်ချက်ပြီး ထလုပ် လိုက်တာပါ။ သေနင်္ဂဗျူဟာ ဘက်ပြောင်းမှုကြီး လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
နေဝင်းရဲ့ တွက်ကိန်း (သေနင်္ဂဗျူဟာအရ တွက်ချက်မှုက)
(၁) မူကြီး (၅) ချက် ဖျက်ပြီး အမေရိကန်ဘက် ပြတ်ပြတ်သားသား ကပ်ဖို့အချိန် ရောက်ပြီ။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကစပြီး ဗီယက်နမ် ပြဿနာမှာ အမေရိကန်က ပါနေတယ်။ စစ်အရှိန်လည်း မြှင့်ပြီးရင်းမြှင့်နေတယ်။ အမေရိကန် နိုင်မှာပဲ။ သူက ဘယ်တုန်းကမှ စစ်ရှုံးဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်တဲ့ဘက်ဝင်ပေါင်းမှ အမြတ်ထွက်မယ်။
(၂) အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးမှာ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ခဲ့ကြလို့ အမေရိကန်က ဆုချခံရတယ်။ အမေရိကန်က သူဌေးဆိုတော့ ဘီလျံလိုက် ရကြတယ်။ အာရှကျားတွေ ဖြစ်လာတော့ မယ်။ သူတို့လို အခုလုပ်ထားမှ နေရာကျမယ်။ အမေရိကန် ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောင်းရရင် စားပေရော့ တသက်လုံး။
(၃) ပြည်တွင်း ကွန်မြူနစ်ပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာကို ကြားနေရေးတွေ၊ မူကြီး (၅) ချက်တွေနဲ့ လုပ်နေရင် အမြစ်ပြတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန်ဘက် ပြတ်ပြတ်ရပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အမြစ်ဖြတ်ပစ်နိုင်နေပြီ။
နေဝင်းက အဲဒီသုံးချက် တွက်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။
မူကြီး (၅) ချက်တာရိုးကို ချိုးပေး လိုက်တော့ အနီဒီလှိုင်းကြီး ဒလဟောစီးဆင်း လာတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးရဲ့ “နယ်စပ်ကနေ ပဲခူးရိုးမအထိ “ဟိုချီမင်းလမ်း” ဖွင့်ခွင့် (ဗကပ) ကို မပေးလိုက်ပါနဲ့၊ တရုတ်နဲ့အမြန်ချဉ်းကပ်ပါ။ ဦးနုနဲ့ သူ့ကို တရုတ်ပြည်လွှတ်ပါ။ ဟိုတုန်းက သူတို့
မော်စီတုန်းကို တက်ပြောခဲ့လို့ တရုတ် ပြည်ရောက် (ဗကပ) တွေကို ဗမာပြည် ပြန်ခွင့် မပေးဘဲထားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလည်း (ဗကပ) ကို မကူညီဘဲ ပြန်ခေါ်အောင်လုပ်ဖို့ သူတို့ (နု၊ အောင်ကြီး) ကို လွှတ်ပါလို့ စာရေးခဲ့တယ်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးစာကို မရခင် ကတည်းကတွက်ကိန်းမှားသွားပြီဆိုတာ နေဝင်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ပြည်ကို အမျက်ဖြေစကားတွေ ပြောနေတာပါပဲ။ ဆိုဗီယက်က တရုတ်ပြည် ချောက်ကျအောင် နေဝင်းကို ဒီကိစ္စ ကုလသမဂ္ဂ တင်စေချင်တယ်။ တရုတ်က ကုလသမဂ္ဂထဲ မဝင်နိုင်သေးချိန် ဖြစ်တယ်။ (၁၉၇၁ ကျမှ ဝင်ခွင့်ရတာ)
နေဝင်းအတွက် လွဲသွားတာက နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးကို တွက်ချက်ရတာ ဖြစ်လို့ပဲ။ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကို တွက်ရတာက လွယ်တယ်။ ဦးနု၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးသိန်းဖေ ( မြင့် )၊ ဦး – – ၊ ဗိုလ် – – ၊ သခင် – – စသူတွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ် ဆိုတာကို တွက်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အာဏာရယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးရယ်၊ ပုလိပ် ရယ်၊ ထောင်ရယ်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်မဟုတ် လား။
အခုတွက်ရတာက ကြီးငါးကြီးထဲက သုံးကြီး (အမေရိကန်၊ ဆိုဗီယက်၊ တရုတ် ) ကို တွက်ရတာပဲ။ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘာ လုပ်လိမ့်မယ်၊ ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ တွက်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။
နေဝင်းတွက်ကိန်းမှားတော့ အမေရိကန်ရဲ့ ဆုမရဘဲ တရုတ်ရဲ့ ဒဏ်ပေးတာပဲ ခံရပါတယ်။ ၁၉၆၇ ဆိုတာ တရုတ်ပြည်မှာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး စဖြစ်ပြီး အရှိန်ရနေ ချိန်ပါ။ ပြည်ပအန္တရာယ် သိပ်သတိထား နေပါတယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်မီး ကျယ်ပြန့်လာ မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က အလွန်အကဲဆတ်နေချိန်မှာ သွားပြီးရန်စသလိုလုပ်မိလို့ ဒုက္ခတွေ့တာပါ။ ဒွေးရော ဥပဒ်ရော တိုးသွားလို့ ဒဏ်ချခံရတာပါပဲ။
ဗမာပြည်က အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးတို့လို ရေမြေခြားနေတာ မဟုတ်ပါ။ ရေမြေတကြော တည်း ဖြစ်ရုံမက နယ်စပ်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်မျိုးစုံ ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ နားလည်မှု ရထားတဲ့ KMT တပ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ KMT ဆန့်ကျင်တဲ့ တပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒဏ်ချဖို့ အချက်အလက်ကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေလို့ လွယ်တာပါ။ အဓိက အကျဆုံး အချက်က ဗမာပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေတာပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေရေး မူကြီး (၅) ချက် ချမှတ်လိုက်လို့ (ဗကပ) ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကေဒါတွေ အများကြီး တရုတ်ပြည်ထဲမှာ သောင်တင် နေပါတယ်။ KNU နဲ့အတူတောခို၊ ကချင်ပြည် (ဝန်ပေါင်) တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် PNDF ဖွဲ့ပြီး တိုက်ရာကနေ တရုတ်ပြည်ထဲ ပြေးဝင်သွားတဲ့ ဗိုလ်နော်ဆိုင်းတပ်ကလည်း ရာချီရှိနေတယ်။ သူတို့ကလည်း တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပညာပေးမှုကြောင့် တော်လှန်ရေးပညာ ရနေတယ်။ အမိမြေပြန်ပြီး တပွဲတလမ်း စမ်းချင်နေကြတယ်။
မူကြီး (၅) ချက်တာရိုးကို နေဝင်းကချိုးပေးလိုက်တော့ အဲဒီရဲဘော်တွေ ပြန်နိုင်သွား ပါတယ်။ ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးသမားက ဗမာပြည် ပြန်တာပါ။ အဲဒီကတဆင့် အနီဒီလှိုင်းကြီး ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ သူဘာကောင်မှ မဟုတ်မှန်း သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနုကို ရှေ့တင်ပြီး တရုတ်ပြည်သွားဖို့ စီမံကိန်းချတာပါ။
ဦးနုကလည်း ခေတ်သစ်ရှင်ဒီသာပါမောက် တာဝန် မယူဝံ့ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း သူ့စီမံကိန်း ရှိနေပါတယ်။ အက်ဒဝပ်လောရုံ စီမံကိန်းပါ။ ထိုင်းဗမာနယ်စပ်သွားပြီး အနီဒီလှိုင်းတားဖို့ တာရိုးကြီးဆောက်ဖို့ စီမံကိန်းပါ။ အရှေ့ တောင်အာရှကို အနီရောင်မလွှမ်းစေဖို့ လုပ်တဲ့စီမံကိန်းကြီးမို့ လုပ်ပျော်တယ်လို့ ဦးနုထင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အကူအညီ လည်း ဒလဟောရလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရှေ့တန်းမှာ နေဝင်းက “အနီလှိုင်း” တား၊ နောက်တန်းက ဦးနုက တာရိုးသစ်ဆောက်၊ စီမံကိန်းတခုလုံးရဲ့ ညွှန်ချုပ်က အမေရိကန်။
ဦးနုမှာ ခေါင်းဆောင်မှုအင်အား တောင့်ပါတယ်။ အက်ဒဝပ်လောရုံရဲ့ စည်းရုံးရေး ကြောင့် ထိပ်သီးတွေ စုမိပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ တဖွဲ့စာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ စုမိတာပါ။ နိုင်ငံခြား မှာသွားပြီး အခြေချနေသူတွေတောင် လန်းဆန်းတက်ကြွလာပါတယ်။ အမေရိကန် အကူအညီ သာ ရလို့ကတော့ မိုးဒူးနဲ့တိုက်မယောင်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူထုလက်မခံပါ။ အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဝင်လာမှာ လက်မခံနိုင်ပါ။ စစ်အတွင်း ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီး အင်္ဂလိပ်တိုက်၊ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဂျပန်တိုက်တာကို (၃) နှစ်အတွင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် (၃) နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ရပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်မှာ ဒီလောက်လွယ်မှာ မဟုတ်ပါ။ လွယ်လွယ်ထွက်သွားမှာ မဟုတ်ပါ။
စီမံကိန်းကြီးထဲပါနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေမှာ ကိုယ်စီရည်မှန်းချက် ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းကလည်း မဆလ တပါတီစစ်အာဏာရှင်စနစ်က မလျော့နိုင်၊ ဦးနုကလည်း ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီကို အပွန်းမခံနိုင်၊ KNU. NMSP တို့ကလည်း ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီ ရှိနေတော့ “ညွှန်ချုပ် ” လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။
(ဗကပ) ရဲ့ အနီလှိုင်းကိုစီးရေးကလည်း “ပါတီတွင်းတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်” ကြောင့် ရှေ့မတိုးနိုင်။ အနီလှိုင်းတာရေးဘက်ကလည်း တညီတညွတ်တည်းမရှိ အီလယ်လယ်ဖြစ်နေခိုက် မှာပဲ –
တရုတ်ပြည်က သေနင်္ဂဗျူဟာ အကွက်တကွက် ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ကစ်ဆင်ဂျာ ရဲ့ လျှို့ဝှက်တရုတ်ပြည်ခရီးနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ တရားဝင် ၁၉၇၂ ခရီးပါ။ ရဲဘော်မော်စီတုန်း၊ ရဲဘော်ချိုအင်လိုင်းတို့ ရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်ပါ။ တရုတ်ပြည်ကို အမေရိကန်ရဲ့
သေနင်္ဂဗျူဟာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ပြောင်းသွားစေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်မှာ နေရာယူမှုအသစ် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ တရုတ်ရော အမေရိကန်ပါ သဘောတူလို့ သေနင်္ဂဗျူဟာ မိတ်ဖက်ဖြစ်ကြ တာပါ။
“အနီလှိုင်း” တားဖို့ အမေရိကန် က တာရိုးသစ်ဆောက်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဦးနုတို့ “အိမ်ပြန်” ရုံမှတပါး တခြားလုပ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ဖို့ ခေါ်သံကို သူပစ်ပယ်လို့ မဖြစ်တော့ပါ။
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် နေရာယူမှု အသစ် ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မမှန်း နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုဗီယက်က ဒေါအပွဆုံးပါ။ ဆိုဗီ ယက်ကို ပိုပြီးထိပါတယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းလည်း အာပတ်ဖြေဖို့ တရုတ်ပြည် အကြိမ်ကြိမ် သွားပါတော့တယ်။ တကြိမ်မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ်ချင်း ဆွေးနွေး စရာတွေ ဆွေးနွေးပြီးလို့ ဗမာပြည် ပြန်ခါနီးမှာ ဥက္ကဌမော်ကို သွားနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ လုပ်နေ ကျထုံးစံမို့ လုပ်တာပါ။ နှစ်ဘက် ထူးထူး ထွေထွေပြောလေ့ မရှိပါ။
ဒီတခါမှာတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ရဲဘော်မော်စီတုန်းက ဗမာပြည်ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ (ဗကပ) နဲ့ (၈၀) ဥက္ကဌချင်းစကားပြောဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းကလည်း သူ့အနေနဲ့ စကားပြောဖို့ သဘာတူကြောင်း၊ သူ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးဖို့ တရားဝင် အကြောင်းပြန် မယ့်အကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရဲဘော် ဟွကိုဖုန်းလက်ထက်၊ ရဲဘော်တိန့်ရှောင်ဖင် လက်ထက်လည်း အဲဒီလိုပဲ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၉ နဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကျမှ “စကားပြောပွဲ” လုပ်ဖြစ်တာ ပါ။
ကမ္ဘာ့စနစ်က ဗမာပြည် ပြည်တွင်း စစ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက် စေသလဲ ဆိုတာသိဖို့ အသေးစိတ်တင်ပြတာပါပဲ။
ကိစ္စတွေက ပြီးခဲ့ပါပြီ။ ထပ်တကျော့ ပြန်လာမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့စနစ် အပြောင်းအလဲဟာ မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ဖက် ကြောင်းကို အတွေ့အကြုံနဲ့ သင်ခန်းစာထုတ် ယူဖို့ လိုပါတယ်။
စစ်အေးခေတ်တုန်းက အိန္ဒိယက ဗမာပြည်နဲ့ သိပ်မပတ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်အေးခေတ်လို့ ပီပီပြင်ပြင်မဖြစ်ခင်တုန်းက “ရန်ကုန် အစိုးရ” ကို ကယ်ခဲ့ပြီးနောက် မူ (၅) ချက်နဲ့ပဲ ဗမာပြည်ကို ထိန်းထားပါတယ်။ အဓိကအာရုံပြု တာက စင်တိုး ( CENTO ) ထဲ ပါနေတဲ့ ပါကစ္စတန်ပါ။
တရုတ်ကတော့ သမိုင်းအမွေအဖြစ် ကွန်မြူနစ်ချင်းစိတ်ဓာတ်အရ ဆက်ဆံပါတယ်။ ဆီးတိုး (SEATO) ရှိနေတာ၊ ဗီယက်နမ်စစ် ဖြစ်နေတာကလည်းရှိတော့ ဗမာပြည်အရေးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ လူကြီး (၅) ချက်ကို နှစ်ဘက်ကထိန်းသိမ်းဖို့ အလွန်အမင်း လိုလားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်ထဲ ဝင်မပါမိအောင် အလွန်သတိထားပါတယ်။ (ဗကပ) ကို ကျည်တတောင့်၊ လက်နက် တလက် မကူသလို ၊ အစိုးရဘက်ကိုလည်း လက်နက် ကျည်မရောင်းပါဘူး။ စစ်ဝတ်စုံ ချုပ်နိုင်တဲ့ပိတ်၊ စစ်ဖိနပ်တောင် မရောင်းခဲ့ပါဘူး။
မူကြီး (၅) ချက်ပြန်ပြီး ထိန်းကြ တာရယ်၊ စစ်အေးလွန်ခေတ် ရောက်တာ ရယ်က မရှေးမနှောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်မှာ ပြည်တွင်းစစ် မရှိစေချင်ရုံမက နိုင်ငံရေးလည်း တည်ငြိမ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ သိပ်ကိုပြင်းပြပါတယ်။
စစ်အေးလွန်ကာလရောက်တာနဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ရေး ကလည်း မရှေးမနှောင်း ပေါ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရောင်းနိုင်တာအားလုံးရောင်း၊ ဝယ်နိုင်တာ အားလုံး ဝယ်ပါတယ်။ ။
မူကြီး (၅) ချက် ပျက်နေတုန်းက (ဗကပ) ကို ကူညီနေတုန်းကဆိုရင် “သစ်တတို၊ စပါးတစေ့” မဝယ်ပါ။ (ဗကပ) က စပါးထွက်တဲ့ ဒေသကနေ တရုတ်ပြည်ဖြတ်ပြီး စားစရာ မလုံလောက်တဲ့ ဝ နယ်ကို ဆန်သယ်ပါရစေ၊ ဗမာပြည် မြောက်ဖျားမှာ အလေ့ကျပေါက်ပြီး တောထနေတဲ့သစ်တွေ ရောင်းပါရစေလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
တို့ကူတာဟာ ဗမာပြည်က ဆန် တွေ၊ သစ်တွေ လိုချင်လို့ကူတာလို့ အပြောခံ ရမယ်။ ဒါကြောင့် သစ်တတို၊ စပါးတစေ့ တရုတ်ပြည်ထဲ မသွင်းပါနဲ့ ၊ ဝနယ် သယ်သွား တဲ့စပါး လူတွေသိမှာမဟုတ်ဘူး၊ တရုတ်ပြည်ထဲ သွင်းတာပဲသိကြမှာဆိုပြီး ယတိပြတ်ပယ်ချ ပါတယ်။ ရဲဘော်ချိုအင်လိုင်းကိုယ်တိုင် ပယ်ချ တာပါ။ ဝနယ်မှာ စားစရာမရှိရင် ဆန်ပေးမယ် ဆိုပြီး ဆန်တွေ နှစ်တိုင်းပေးနေပါတယ်။
မူကြီး (၅) ချက် ပြန်ဖြစ်လာတာ ဟာ နယ်စပ်က လူမျိုးစုရဲဘော်တွေကို ငြိမ်းချမ်း ရေးအဖွဲ့ (ဒီစကားလုံးက (ဗကပ) သာသုံးတာပဲ၊ စစ်အစိုးရက တတ်နိုင်သမျှရှောင်တဲ့ ဝေါဟာ ရပါ) တွေ ဖြစ်စေတာပါပဲ။ နယ်စပ်အရောင်း အဝယ်တွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာစေပါတယ်။ ရောင်းကြဝယ်ကြတာမှာ ဘာတွေရောင်းပြီး ဘာတွေဝယ်တယ်ဆိုတာ ဗမာစီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရောင်းကြ ၀ယ်ကြတော့ ဒါကို အမေရိကန်က မလိုလား ပြန်ဘူး။ စစ်အေးခေတ်တုန်းက သူတို့ ပြောခဲ့ ဟောခဲ့တာတွေကို ၁၈၀ ဒီဂရီ လှည့်ပစ်လိုက် တယ်။ ပိတ်ရမယ် ဆို့ရမယ် ဖြစ်လာတယ်။
ကမ္ဘာကြီးက ဒီတခုတည်းပါပဲ။ လည်မြဲလည်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အေးလွန် ကာလ ရောက်လာတော့ တမျိုးဖြစ်လာတာ ပါပဲ။ တရုတ်ပြည်ဟာ သေနင်္ဂဗျူဟာ မိတ်ဖက် လား၊ ပြိုင်ဘက် (ရန်ဘက်လို့ မသုံးဝံ့သေးဘူး) လား၊ တယောက်တမျိုး ပြောလာပါတယ်။ စစ်အေးခေတ်တုန်းကတော့ မိတ်ဖက်၊ စစ်အေး လွန်ခေတ်မှာ ပြိုင်ဘက် ဗလောင်းဗလဲ လုပ်ပါ တယ်။
အဲဒီလို ဗလောင်းဗလဲ အမေရိကန် လုပ်တာကို ဖာဖို့ထားဖို့ ကြိုးစားနေကြသံ ကြားရပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်နဲ့ ဖက်ဆစ် အတူတူ ပဲလို့ပြောသံ ကြားရပါတယ်။ ကလေး ကတောင် မတူဘူးဆိုတာ သိနေတဲ့ကိစ္စကို ဘာ့ကြောင့် ဗလောင်းဗလဲ ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတော့ အမေရိကန် ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်က ဗလောင်းဗလဲလုပ်လို့ပါပဲ။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေ ပြောတာကို တာဝန်အရ ပြောတာတွေပဲလို့ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရကို ဖက်ဆစ်လို့ (ဗကပ) က ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဖက်ဆစ်စနစ်က နယ်ချဲ့ လက်ဝါးကြီး အုပ် အရင်းရှင်ကြီးတွေက မွေးထုတ်တဲ့ဝါဒ၊ နယ်ချဲ့ နိုင်ငံတွေမှာသာ ပေါ်နိုင်တဲ့စနစ် ဖြစ်လို့ ပါ။ ဗမာပြည်လို ကိုလိုနီမဖြစ်အောင် ရှောင်နေ ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဖက်ဆစ်စနစ် မပေါ်နိုင်လို့ ပါပဲ။ ဖက်ဆစ်ဆန်တာတော့ ရှိပါတယ်။ ဗမာ့နည်းဗမာ့ဟန် ဖက်ဆစ်ဝါဒပဲဖြစ်မယ့် အလားအလာ ရှိပါတယ်။
စစ်အေးလွန်ခေတ်ဟာ ခဏပဲ ရှိမှာပါ။ ကမ္ဘာ့စနစ်သစ်တခု အနှေးနဲ့အမြန် မပေါ်မီ ယာယီရှိတဲ့ကာလကလေးပါပဲ။ ခွင်လုံးကျွတ်နိုင်လိုက်ပြီထင်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အနိုင်အရှုံးမရှိတဲ့ပွဲလို့ထင်တဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ လွန်ဆွဲနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်အနေနဲ့ အနေတတ်ရမယ့် ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောထားမှန်ကြမှ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်နိုင်လိမ့်မယ်
စစ်မြေပြင်မှာ မရနိုင်တာကို စားပွဲပေါ်မှာ တောင်းနေကြလို့တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ဦးကျော်ငြိမ်းစခဲ့တဲ့ “သန္ဓေသား ဖျက်ချရေး” ပေါ်လစီ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ပြည်တွင်းစစ်က အသက်ငါးဆယ်ကျော်ပါပြီ။
(ဗကပ) အနေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲ တခါနဲ့ စကားပြောပွဲတခါ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ် ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ဖြစ်စဉ်တွေက ဦးအောင်စော ဦးရဲ့ နှစ် ၅၀ စာအုပ်မှာ ပါပါတယ်။ ပြည့်စုံ ပါတယ်။ စကားပြောပွဲကိုတော့ စစ်အစိုးရက ဘာမှ မထုတ်ပြန်ပါ။ အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းတယ် ၊ ဆိုတာပဲကြေညာပါတယ်။ ။
၁၉၆၃ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ဘာအခြေခံဥပဒေမှ မရှိပါ။ ၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။ စကားပြောပွဲ ကျတော့ အခြေခံဥပဒေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဆလ တပါတီသာရှိရမယ့် ဥပဒေပါ။ (ဗကပ) အတွက်သာမက မဆလ ကလွဲလို့ တခြား ဘယ်ပါတီမှ မရှိနိုင်ပါ။
အဲဒီစကားပြောပွဲပျက်တော့ ပြည် တွင်းစစ် တကယ်ရပ်ချင်ရင် ရပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို (ဗကပ) က ရှာပါတယ်။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အခြေခံဥပဒေရှိမှဖြစ်မယ်လို့ သိလို့ တင်ပြပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာပါ။
၁၉၈၈ အုံကြွမှုကြီး အထွတ်အထိပ် ရောက်နေတုန်းက ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး နည်း လမ်းတခု ပေါ်လာတယ်ထင်လို့ မြို့ပေါ်က အင်အားစုတွေ အားလုံးစုစည်းပြီး ကြားဖြတ် ခေါ်ခေါ် ယာယီခေါ်ခေါ် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ တခုပေါ်ရင် (ဗကပ) က အဲဒီအစိုးရကို ထောက် ခံမှာပါ။ အစိုးရတပ်ထဲကလည်း ယာယီအစိုးရ ကို ထောက်ခံမယ့်သူတွေ တွေ့ထားပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ်ကို လူထုနည်းနဲ့ ရပ်ပစ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်အောင်ကြီးနဲ့ ဦးနုထွက်ပြီး ပွဲဖျက်ကြလို့ ယာယီဒီမိုကရေစီ ညွှန့်ပေါင်း အစိုးရဖွဲ့ရေး ပျက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး အလားအလာပါ ပျက်စီးသွား ပါတယ်။
အခု ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းပေါ်လစီ ချထားပါတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ NLD. DPNS. ABSDF ဗကသ စတဲ့ အဖွဲ့တွေ အရင်ဆုံးဆွေးနွေး၊ နောက် ငြိမ်း အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေး၊ တတိယ ခြေလှမ်းကျမှ (ဗကပ) ဆွေးနွေးကြဖို့ပါပဲ။ ဒါဟာ ပြည်တွင်း စစ်ရပ်စဲရေးကို တရစ်ချင်းလုပ်သွားဖို့ ရည်ရွယ် လို့ တင်ပြတာပါ။
ပြည်တွင်းအခြေအနေကို အကဲ ဖြတ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး နည်းလမ်းတွေ (ဗကပ) က ရှာနေဦးမှာပါပဲ။ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်ချင်တဲ့ သဘောထား ဘက်အားလုံးမှာရှိကြမှ ရပ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့နိုင်ပြီးပြီ၊ စေ့စပ်စရာမလို ဆိုတဲ့သဘောထား ထားနေရင် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
အဲဒီလို နိုင်လိုက်ပြီလို့ ထင်တာဟာ နဝတ နအဖ မှ မဟုတ်ပါ။ ၁၉၅ဝ နှစ်တွေတုန်း ကတည်းက ဖဆပလလည်း ထင်ခဲ့တာပါ။ ကောက်သင်းကောက်စရာပဲ ကျန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စိုက်တာရိတ်တာက သုံးလေးနှစ်၊ ကောက်သင်းကောက်တာက နှစ် ၄၀ ကျော် ဆိုတော့ လူရယ်စရာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုလည်း ပြည်တွင်းစစ် ရပ်တာ မဟုတ်ကြောင်း “ငြိမ်းအဖွဲ့” တွေ ရှိနေတာက ပြပါတယ်။ ခြံထဲကကြက် ရိုက်စားထားတဲ့ ခွန်ဆာအဖွဲ့ကိုတောင် ပြတ်အောင်နိုင်လိုက် ပါသလား။ မနိုင်ဘူးဆိုတာ စစ်အစိုးရ သိပါ တယ်။
အမေရိကန်ထွက်ပြီး ကျွတ်ကိုက်လို့ သေတဲ့မသာအဖြစ် နတ်သံနှောသွားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးလည်း အပြတ်မနိုင်တာမှန်း သိပါတယ်။ သူပြောတဲ့ “ကျွတ်” တွေဆိုတာ အများစုက သူတို့ ၁၉၅၅ က ၁၉၅၈ အထိ လုပ်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ချပွဲကြီးတွေမှာ ပါနေတဲ့ အောက်ခြေက ရဲဘော်တွေ မဟုတ်ပါလား။
သဘောထားမမှန်ကြရင် ဘယ် ဘက်ကမှားမှား ပြည်တွင်းစစ် မရပ်နိုင်ပါ။ အရှုံးအနိုင်ပြတ်အောင် တိုက်ကြရမှာပါပဲ။
အခုတင်ပြခဲ့တာဟာ (ဗကပ) ထဲ က တယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအမြင်ပါ။ မျိုးဆက် သစ်တွေခေတ်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာ ပြေလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မျိုးဆက်ဟောင်း၊ မျိုးဆက်သစ် တွဲပြီး (၁၃) နှစ်ခရီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပါပြီ။ ရှေ့မှာ မျိုးဆက်သစ်များချည်း ချီတက်ကြရပါမယ်။ ကမ္ဘာ့စနစ်သစ်လည်း မရှိသေး၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလည်း မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ရှိပါလိမ့်မယ်။
၁၉၃၈ ကနေ ၁၉၄၈ ဆယ်နှစ် ကာလဟာလည်း ရှုပ်ထွေးခဲ့ပါတယ်။ အရှုပ်ထဲ ကနေ ပြည်တွင်းစစ် ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သင်ခန်းစာယူသင့်တာယူ၊ အတွေ့ အကြုံ ဆက်ခံသင့်တာ ဆက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ။
Author pansodanschoolPosted on December 31, 2021 December 31, 2021 Categories တော်လှန်‌ရေးသမိုင်း, ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်ရာ တော်လှန်ရေးစာ
Previous Previous post: ဆဒမ်ဟူစိန် ကျဆုံးခန်း – သစ္စာတည်
Next Next post: ပြည်သူသာလျှင် ပဓါန (ဟွန်ဆန်၏ ခရီးစဉ်ကို ရှုမြင်ကြည့်ခြင်း) – လင်းသူ့ဟန်